Izithuba zamva nje | I-Crypto Gator | Eyona Dijithali yeMali ilungileyo, iBlockchain kunye neAgregregator yeNdaba yeendaba
Iindaba zeNtengiso ye Forex 0
Olona phawu lubalaseleyo lwe-ZuluTrade forex emva koqwalaselo lweqonga
Ukurhweba ngezezimali kunye neeasethi kukuzibandakanya ixesha elide, ngokusisiseko kukuthenga kunye nokuthengisa iiasethi zezemali kwimibala eyahlukeneyo kusetyenziswa izixhobo ezenzekelayo kunye netekhnoloji. ZuluTrade lelinye lamaqonga orhweba ngemisebenzi emininzi anikezela ngeendlela ezininzi zokwenza ikopi kurhwebo kwi-forex, ii-indices, ii-stocks ze-cryptocurrencies kunye nemarike ye-cryptocurrensets.
Ikopi yokurhweba yinkqubo apho abarhwebi bekopa urhwebo lwabathengisi abanamava kwiimarike zezemali ukuze bafumane iziphumo ezifanayo kurhwebo. ZuluTrade ibonelela ngesixhobo esizisebenzelayo esipheleleyo esihamba kunye neendlela zokunika ingxelo kunye nokwabelana ngolwazi. Ukusukela namhlanje, ZuluTrade Uqokelele ngaphezulu kwabathengisi abasisigidi ngexabiso lokurhweba elingaphezulu kwe- $ 800 yezigidigidi.
Le mbali izayo emva kwezicelo ezingathethekiyo ngabantu abangamaZulu abathanda imali. Urhwebo lwesiZulu yasekwa ngaxa lithile ngo-2007 nguLeon Yohai noKosta Eleftheriou. Eyona njongo yayikukwakha iqonga lokurhweba elinikezela ngokukhululekileyo ukuthengisa ikopi, kwi2009 inkampani sele inabathengisi abaziingcali abangaphezu kwama-4,500 2014 ababonelela ngemiqondiso bekopa iipotifoliyo zorhwebo. Urhwebo lwesiZulu ngo-2015 longeze izinto ezinje ngeZulu Guard kunye nenkxaso yabathengi, emva koko yaqhubeka nokufumana ubudlelwane kunye neSpotOption ukwenza iinketho zokurhweba ngamabhinari. Urhwebo lwesiZulu lwenza impumelelo enkulu kakhulu ngo-XNUMX eyathi ekugqibeleni yalufumana ibhaso (ilayisenisi yolawulo lweepotifoliyo ye-EU) evela kwi-European Union, oku kwazisa Urhwebo lwesiZulu kumbono wehlabathi, wonke umntu wabona ukuba semthethweni kwawo kunye namathuba.
Dibana neQonga lokuThengisa likaZulu
Xa kuziwa kurhwebo kwi Iqonga lezorhwebo lakwaZulu impumelelo yomrhwebi ixhomekeke kubuchule bakhe bokubona kunye nokukopa urhwebo lweengcali kubarhwebi eqongeni. Iqonga lezorhwebo lakwaZulu ayiloqonga lokuceba abantu abanengqondo yokucinga 'yokufumana ubutyebi ngokukhawuleza', kunokwenzeka ukubona urhwebo lobuchwephesha kunye nokwenza izigidi kule veki kwaye uqale ukuphulukana neveki ezayo kodwa ayithobeli ngandlel 'ithile Ukufumana inzuzo kwiqonga lezorhwebo lakwaZulu, konke okufuneka ukwenze njengomrhwebi kukwenza uphando lwakho kwaye ufumane ubuncinci abathengisi ababini okanye abathathu abathengisayo abanamava eminyaka eyimfuneko (iminyaka emi-4 okanye emi-5).
Iqonga lokurhweba liquka ukhetho lokurhweba ukhetho lwebhinari, i-forex, isitokhwe kunye nezinto ezixabisekileyo ezinje ngeoyile kunye nezalathiso ezinje ngeNASDAQ. Ufumana ithuba lokurhweba ngezi ndlela usebenzisa iindlela zokurhweba zabathengisi abaziingcali.
Iqonga lahlulwe langamacandelo amabini:
(Icandelo A) Ababoneleli ngophawu: Ngabarhwebi abaziingcali ababelana ngeendlela zabo nabalandeli kunye nembuyekezo exhomekeke kwimpumelelo yezicwangciso zabo.
(Icandelo B) Abalandeli: abanakunyanzeleka ukuba babe ngabarhwebi abaziingcali kodwa banokukopa amaqhinga abarhwebi abaziingcali kunye neepotifoliyo (izicwangciso) zabanye abalandeli abanokuthi bafumane amanqanaba athile okuphumelela ngelixa bathengisa.
Ngenxa yokuzibophelela ixesha elide kunye nenkxaso yenkxaso yabathengi engagungqiyo urhwebo lwesiZulu lufumene iBrokerNotes inqanaba lesithathu lenkxaso yeAAA.
Iimpawu zeQonga lokuThengisa likaZulu:
Abarhwebi ikakhulu bajonge le nto kuba ibeka iinzuzo zabo zokuthatha ngelixa bethengisa. Umrhwebi uhlawulisa ikhomishini ngalo lonke urhwebo ukongeza kuncedo esele lukhona kodwa iiakhawunti zabarhwebi ezinxulunyaniswe neqonga lezorhwebo lakwaZulu ziya kubizwa zero zero Umthengisi wemveli wamaZulu (IAAFA).
Ukusasaza ipesenti okanye amaxabiso (umahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso) kunikwa ngabarhwebi abahlukeneyo; Nangona kunjalo uhlobo lwesibini semali kunye nexesha lezorhwebo nazo zinokuba nefuthe ekusasazeni okt ukusasazeka kuyanda xa kukho ukungazinzi kwintengiso ephezulu kwaye kunciphisa xa kukho ukungazinzi kwintengiso ephantsi.
Njengabathengisi abanamava kwikamva lokutshintshiselana nge-crypto ndiyifumana iyonwabisa kakhulu ukuba urhwebo lwamaZulu lubonelela ngeendlela ezizodwa kurhwebo. Inyani yile yokuba amandla okunyusa anakho ukonyusa umvuzo kunye nokunciphisa umvuzo; Nangona kunjalo, kuhlala kubalulekile ukwazi ukuba ukusebenzisa leverges ephezulu (1: 1000) kuthetha umda osezantsi, oya kuthi unyuse inqanaba lomda kunye nomda wasimahla, nangona oku kungakhokelela kugqithiso, ukuhla kweakhawunti kunye nokupheliswa kokugqibela. Ke ulawula lo mngcipheko ngcono xa uthengisa usebenzisa i-1: 100 yokuphakamisa.
(3) Imali yokurhweba:
Yonke iqonga lokurhweba linentlawulo yokurhweba kwaye iqonga lokurhweba lamaZulu alikho ngaphandle, kukho isidingo sokuba uqaphele iindleko ezongezelelweyo eziza nokuthengisa Iqonga lesiZuluImirhumo ebizwayo ixhomekeke kwisibini semali esithengiswayo, nangona ezi ntlawulo zingahambeli phambili zisika inzuzo amaxesha ngamaxesha kwaye abathengisi be-intraday abayihlawuli le mali. Abarhwebi obakhuphelayo bahlawulwa ngokuthe ngqo ngurhwebo lwamaZulu kwikhomishini yorhwebo. Kukho isidingo sokuba wazi ukuba urhwebo lwesiZulu lubonelela kakhulu ngebhonasi yediphozithi kunye nokunyuselwa kwaye ke ukutyelela iiwebhusayithi zorhwebo lwamaZulu amaxesha ngamaxesha kuya kukunika ithuba kunye nokufikelela kula mathuba okuthoba umlomo.
(4) Iidipozithi ezincinci kunye neziQalayo:
Urhwebo lwesiZulu luyakuqonda ukungqubana okwenzeka ngoku kwihlabathi liphela kwaye ke lunemfuno ephantsi yedipozithi. Idipozithi encinci efunwa ngabarhwebi ngaphakathi kweqonga lezorhwebo lakwaZulu lisusela kwi- $ 1, £ 210, $ 300, 300 AUD, € 250 ukuya kuma-25,000 JPY ngokwahlukeneyo.
(5) Amazwe anokusebenzisa urhwebo lwesiZulu:
Iqonga lezoRhwebo lwesiZulu alikhuli nje kuphela kwizindululo zexabiso kodwa liyakhula nakwigama lendawo. isiZulu yamkela abarhwebi abavela e-United Kingdom, United States, Canada, Singapore, Hong Kong, Germany, Norway, Italy, Qatar, Sweden, Australia, South Africa, Denmark, Saudi Arabia, Luxembourg, Kuwait nakwamanye amazwe amaninzi.
Abaphathi beqonga lezoRhwebo lakwaZulu bayabaqonda abo bakhuphisana nabo kunye neekopi ngaphakathi kwendawo yokurhweba kwaye ke kubalulekile ukuba wazi ezinye zeenzuzo zorhwebo lwamaZulu.
Iindlela zokuSebenzisa iqonga loRhwebo lwesiZulu
(1) Isinxibelelanisi sokurhweba esisebenziseka lula esinokuseta ngexesha elifutshane kakhulu.
(2) Amandla okukhetha umrhwebi wangaphakathi okanye wangaphandle: urhwebo lwesiZulu lunabathengisi bemveli (AAAFX) ababiza imali encinci kakhulu kodwa unokukhetha nomnye umrhwebi wangaphandle oza kurhweba naye.
(3) Abarhwebi abahlukeneyo: kuba konke malunga nokuthengisa ikopi, kufuneka uninzi lwabarhwebi abaziingcali ukuba balandele kwaye benze olona khetho, ukuze ulandele abathengisi be-5-10 okanye nangaphezulu kodwa kuhlala kucetyiswa ukuba ulandele amanani Ndikhululekile ngokupheleleyo kuba ukulandela abathengisi abangama-20 ukuya kuma-40 kunokukwenza ukuba ube semngciphekweni wabarhwebi abakumgangatho ophantsi.
(4) Urhwebo ngeeasethi ezahlukileyo: urhwebo lwesiZulu luxakekisa imisebenzi emininzi kuba unokurhweba ngeemali ezahlukeneyo kubandakanya iimali ezigcina imali kunye nezinto zorhwebo.
(5) I-ZuluRank yenye yeempawu ezizodwa ezibonisa abathengisi abaziingcali ukuze abalandeli bababone ngokulula abathengisi kunye nokwenza ukhetho lwabo.
(6) Ababoneleli ngeempawu baneendlela ezahlukeneyo zokufumana.
(7) Iimpawu zorhwebo lwentlalo zibonelela ngethuba lokuzibandakanya nabanye abarhwebi, kwenza ukuba ukwabelana ngolwazi kube lula.
(8) Inkonzo yokuthengisa ikopi ezinikezelweyo inika elona thuba lilungileyo labo bathanda i-crypto ukuba bafumane inzuzo.
Ububi boRhwebo lwamaZulu
Ezi zilandelayo zezinye zeengozi zeQonga lezoRhwebo lakwaZulu.
(1) Iineendlela ezimbalwa zokuhlawula.
(2) Ukuba ngumnikezeli womqondiso kunokuba nzima kakhulu.
(3) Isikhundla se-algorithm samaZulu asikachaneki ncam kubarhwebi abaziingcali.
(4) Iimpawu zokurhweba ngokwasentlalweni zisisiseko.
(5) Ukusetyenziswa, ukubakho kunye nokukhethwa kwee-asethi-ze-asethi kumiselwe ngabakhethi bezinto abazikhethileyo hayi ngamaqonga orhwebo lwamaZulu.
Ndizithethile zonke ezi zinto, ndingatsho ngokuzithemba Zulutrade.com inikeza iinketho zokurhweba ngengqondo kubo bonke abarhwebi (abanamava nabangenamava). Isiseko somsebenzisi sikhula ngesantya sokukhanya, nangona ineqonga lokurhweba elisebenziseka lula, lingcono, litshiphu kwaye liluncedo ngakumbi kurhwebo nomrhwebi wemveli (AAAFx). Ukurhweba ngenzuzo kulula xa unezakhono kunye neqonga elifanelekileyo lokukhulisa izakhono zakho, iqonga lezorhwebo lakwaZulu liqinisekisa ukuba inzuzo iqinisekile kwaye iyabonakala.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla kwiinyanga 2 ezidlulileyo
Isikhokelo esenziwe lula kwiNtengiso ye-Forex
Apha I-CryptoGator, senza ugxininiso kwi Imfundo yeCrypto kunye nokugcina abafundi bethu benolwazi malunga nehlabathi lezemali.
Imarike yotshintshiselwano lwangaphandle eyaziwa njenge market forex yindawo apho kuthengiswa khona iimali (ukuthenga nokuthengisa). Ngokwesiqhelo, xa abantu bejikeleza ilizwe liphela, kukho isidingo sokutshintshiselana ngezezimali ukuze bakwazi ukuqhuba imisebenzi yeshishini ngaphakathi kwilizwe labo. Le nkqubo yotshintsho lwemali ibizwa ngokuba yintengiselwano yelinye ilizwe kwaye iqhutywa ikakhulu kwimarike yotshintshiselwano lwangaphandle.
Inye into eyenza ukuba intengiso ye-forex ibonakale kukuba akukho ndawo yentengiso iphambili kurhwebo lwemali. Bathengiswa nge-elektroniki okanye baqhutywa ngaphandle kwekhawuntari (OTC). Abahwebi baqhuba yonke intengiselwano ngokusebenzisa inethiwekhi yekhompyuter endaweni yotshintshiselwano lwendawo enye.
The market forex ivulekile ukuthengisa iiyure ezingama-24 ngosuku, ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngemali ezithengiswa kwihlabathi liphela kumaziko amakhulu ezemali aseLondon, eHong Kong, eSingapore, eNew York, eParis, eTokyo, eZurich, eFrankfurt, eSydney, nakulo lonke ixesha.
Intsingiselo yeyokuba ukuphela kosuku lokurhweba eMelika kukuqala kosuku lokurhweba eHong Kong naseTokyo. Imarike ye-forex ihlala isebenza kakhulu ngalo naliphi na ixesha losuku ngokutshintsha kwamaxabiso.
Izinto ezihambisa iMarike ye-Forex
Iindidi zabantu abathengisa iMarike ye-Forex
Imigaqo ebalulekileyo yokuQaphela xa ujongene neMarike ye-Forex
Izibonelelo zeNtengiso ye-Forex ngaphezulu kwamanye amaMakethi ezeMali
Ukuziqhelanisa, izinto ezininzi zinokuba negalelo ekubangeleni utshintsho kumaxabiso emali kwi Imveliso yeFX. Logama nje ezi zinto zihlala zibalulekile ekuhambeni kweemarike, abarhwebi bajonge ezi zinto xa besenza izigqibo zorhwebo.
Le miba ingumda wezehlo zoqoqosho olukhulu njengonyulo lukaMongameli omtsha, okanye ezinye izinto zoqoqosho ezinje ngexabiso lenzala elixhaphakileyo, intswela-ngqesho, iGDP, ityala kwi-GDP ratio kunye nokuhla kwamandla emali, njl. Ikhalenda yezoqoqosho ukuhlala phezulu kwizinto ezinxulumene nokukhutshwa okubalulekileyo kwezoqoqosho okunokuhambisa imarike.
Nabani na othengisa Imveliso yeFX inokuwela ngokwamacandelo amabini: iiHedger kunye neeSpeculators. Ngelixa ezi ndidi zimbini zabarhwebi zihlala zibalulekile kwintengiso, indima yabo, ukubaluleka kwabo, kunye nenjongo yokurhweba kwintengiso zihlala zihlukile komnye nomnye.
IiHedger zihlala zijonge ukunciphisa iintshukumo ezigqithileyo kwizinga lotshintshiselwano. Esi sicwangciso siqeshwe ngamaqela amakhulu afana neTotal, iDangote, kunye neAmazon abajonga ukunciphisa ukubonwa kwabo kukuhamba kwemali yamanye amazwe.
Kwiphepha le-flip, ii-speculators zifuna umngcipheko kwaye zihlala zijonga ukuthatha ithuba lokungazinzi kumaxabiso otshintshiselwano lweenzuzo ezifanelekileyo. Ezi ndidi zabarhwebi zibandakanya iidesika ezinkulu zokurhweba kwiibhanki ezinkulu kunye nabathengisi beentengiso.
Imali esisiseko: Xa ucaphula isibini semali, le yimali yokuqala ebonakalayo. Ukujonga kwi-EUR / USD, eyona mali isisiseko yi-Euro.
Imali eguquguqukayo / yexabiso: Le yimali yesibini kwisibini semali esikhankanyiweyo. Kwimeko ye-EUR / USD, yiDola yaseMelika.
Ixabiso: Ixabiso lokubhida lelona xabiso liphezulu umthengi (umthengi) anokulihlawula. Eli lixabiso oza kulibona xa uzama ukuthengisa iperi ye-forex, ihlala isekhohlo kwikoteyishini kwaye amaxesha amaninzi abomvu.
Buza: Oku kukubuyela umva komyalelo weBhidi kwaye kubonisa owona mnikelo usezantsi umthengisi ekulungele ukuwuhlawula. Eli lixabiso onokulibona xa uzama ukuthenga isibini semali, kwaye ngesiqhelo kunene kwaye kublowu.
Usasazeko: Oku ngumahluko phakathi kwebhidi kunye nexabiso lokunikezelwa, okusasazeka okwenyani kwintengiso ye-forex, kunye nokusasazeka okongezelelekileyo komthengisi.
oluxhathisayo: Ukuxhobisa kwenza kube lula kubarhwebi ukuba bathengise izikhundla ngokunikezela kuphela ngepesenti yexabiso eliphezulu kurhwebo. Oku kunceda abathengisi, ngemali encinci, ukuxhaphaza izikhundla ezinkulu. Ukuphakamisa ukwandisa inzuzo kunye nelahleko.
IiPips / Ipesenti kwiNqaku: I-Pip ihambelana notshintsho lwedijithi enye kwindawo yesi-4 kwidesimali kwisibini esicatshuliweyo. Le yindlela abarhwebi abakwisibini semali ekubhekiswa kuyo kwiintshukumo. Umzekelo, namhlanje, i-GBP / i-USD ifumene amanqaku ali-100.
Utywala: Isibini semali sibizwa ngokuba lulwelo kuphela ukuba sinokuthengwa kwaye sithengiswe ngokukhawuleza ukusukela ukuba isibini semali sitshintshiwe okanye sathengiswa ngabathathi-nxaxheba abaliqela.
Umda: Esi sisixa semali esifunekayo ukuvula iakhawunti evunyelweyo kwaye ngumahluko phakathi koqingqo-maxabiso lwesikhundla sakho kunye neengxowa-mali zomrhwebi obolekiswe ngazo.
Umnxeba waseMargin: Xa imali iyonke efakiweyo, kunye nokudibanisa okanye ukunciphisa nayiphi na inzuzo okanye ilahleko, iwela ngaphantsi kwesixa esichaziweyo (imfuno yomda), umnxeba we-margin uya kubangela ukuba umrhwebi ongeze imali eyongezelelweyo ukuxhasa indawo evulekileyo.
Iindleko zentengiselwano ephantsi: Ngokwenza oko, abathengisi be-forex benza imali yabo ekusasazeni nakwimirhumo yenkxaso-mali ebizwe ubusuku bonke kurhwebo. Xa kuthelekiswa nezinye iimarike zezemali ezinje ngeemarike zorhwebo, intlawulo yekhomishini kwintengiso yeFX iphantsi kakhulu ngenxa yokusasazeka okuncinci kwizibini zemali.
Ukusasazeka okuphantsi: Ngenxa yokufuma okuphezulu kwiibini ezinkulu zeFX ezinje nge-USD, i-EUR, i-JPY, iBhidi / iBuza ukusasazeka iphantsi kakhulu kwezi zibini. Ukuziqhelanisa, ukusasazeka sisithintelo sokuqala ekufuneka esoyisiwe xa intengiso ihambela umrhwebi. Emva kokuhamba ngaphezulu kokunwenwa, naziphi na iipip ezongeziweyo ezihambela umrhwebi zirekhodwa njengenzuzo.
Ukurhweba ngokunyusa: The kwimarike Forex yintengiso ephezulu, oku kuthetha ukuba abathengisi bahlawula kuphela iqhezu leendleko zonke ezifunekayo zokurhweba. Oku kunokuba nakho ukukhulisa inzuzo okanye ilahleko. Oku kuluncedo kakhulu kubarhwebi abanamava abajonga ukwenza okungaphaya kwintengiso.
Ukuthengiswa kwangaphambili inokuba ngumsebenzi owoyikisayo kunye nowoyikisayo kubarhwebi abatsha abangazange baveze imeko yokurhweba enzima, enkulu, kunye nolwelo.
Nangona kunjalo ngezixhobo ezibanzi nezibanzi zemfundo, izikhokelo, iityhuthoriyali, iividiyo, kunye neminye imithombo ekhoyo kwi-intanethi, kwaye ibonelelwe ngabarhwebi, abaqalayo banokuba sendleleni yokwenza inzuzo enkulu Ukuthengiswa kwangaphambili.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Februwari 14, 2021
Izixhobo kunye nezikhokelo 0
Ukuhlaziywa kweWebhu: I-InterServer
Ngaphambi kokukhaba uhambo lwakho ekwakheni iwebhusayithi enobungcali, esinye sezona zigqibo zinzima ekufuneka uzenzile kukukhetha iqabane leenkonzo zokubamba iwebhu. Amaxesha amaninzi, izinto ezininzi zinokuchaphazela eso sigqibo, kodwa ukubambelela kwinkonzo yokubamba ehlangabezana kakuhle neemfuno zakho ezikrwelelwe kuthathwa njengeyona ilungileyo.
Ukuseta umboneleli wewebhu ekunene akungabazeki ukuba ngumsebenzi onzima. Ukukhetha umboneleli weenkonzo ezifanelekileyo zokubamba iwebhu yinkqubo ebaluleke kakhulu yokufumana awona mava aphendulayo kwiwebhusayithi yakho.
Ukhetho lwakho lomboneleli wewebhu oluxhomekeke ikakhulu kwiimfuno zewebhusayithi, kubaphulaphuli ekujoliswe kubo, apho bakhoyo kunye nohlobo luni lomxholo ocwangcisela ukuwusingatha ukuhambisa kubaphulaphuli bakho. Umzekelo, ukuba umntu ujonge ukupapasha ibhlog yeendaba okanye imagazini ekwi-intanethi baya kufuna iinkonzo ezintsonkothileyo xa kuthelekiswa nomntu oceba ukwazisa iwebhusayithi apho upapasha khona iividiyo ezikumgangatho ophezulu ukunikezela kwiwebhusayithi yakho. Le yokugqibela izisa ubunzima obongezekileyo njengokusebenzisa IiNethiwekhi zokuhambisa umxholo (CDN), IiNdawo eziFumanekayo njl. Njl. Ukuhlangabezana neemfuno zewebhusayithi yakho.
Ukwenza ukhetho kunokuba yinto edidayo kakhulu ngakumbi xa kuboniswa ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo. Kolu hlaziyo, siya kunciphisa ukugxila kwethu InterServer Inkonzo yokubamba iwebhu enoluvo olubanzi lweenkonzo ezahlukeneyo ezinikezelwa yi-InterServer. Nokuba ujonge umgangatho I-C-panel yokubamba okanye ukukhupha i Iqonga Ecommerce, sikugubungele.
Ukhetho lokujonga kwakhona InterServer Isekwe kumanqaku abawazuzileyo kumashumi eminyaka adlulileyo bebekhona: ukufikelela kwabo ngokulula, ukhuseleko kunye nokuthembeka kwenethiwekhi. Masingene ngaphakathi ukuze ufumane okungakumbi.
Iimpawu eziphezulu ze-InterServer
I-State-of-the-art yoKhuseleko loKhuseleko
Imimandla engenamda kunye neeWebhusayithi
Isantya esiphambili sokuya kuma-522 ms
IiNkonzo ze-imeyile zasimahla
Inkonzo yabaThengi ephezulu: Inkxaso yeNgxoxo ebukhoma ye-24/7
Indawo yokuGcina engenamkhawulo
Ngaba kufuneka uqwalasele i-InterServer?
InterServer Ngomnye wabanikezeli bokuqala bokubamba iwebhu obekujikeleze ishumi leminyaka ngoku. Ukusukela ngo-1999, i-InterServer ibibonelela ngeenkonzo kwimarike ekhulayo yehlabathi iyenza ukuba ibe yiminyaka engama-21 yokuhanjiswa kweenkonzo ezisemgangathweni ukuza kuthi ga ngoku. I-InterServer ichongiwe ngokukodwa phakathi kwabo bakhuphisana nabo ngokunikezela ngamava enkonzo inye kubasebenzisi bayo. Ukongeza kwiinkonzo zokubamba ezabelwanayo ezinikezelwa yi-InterServer, zikwabonelela ngokusingathwa kwelifu kunye neeseva ezikhawulezayo.
Ukongeza, banikezela Iinkonzo zokubala kubathengi abanokuthi bakhethe ukuthatha ubunini beziseko zophuhliso. I-InterServer ibonelela ngoluhlu olubanzi lweeplani zeseva eziza neseti ebanzi yeempawu ezijolise ekuncedeni ukudala kunye nokugcina iwebhusayithi ngokukhawuleza.
Iseva yokubamba eyaziwayo yakhelwe ukoneliseka kwabathengi. Amaziko edatha enkampani amane onke abanjelwe eUnited States, kuba abasebenzisi baseMelika banokufumana isantya esikhulu kunye nokwoneliseka kwenkonzo.
InterServer Uqokelele igama elihle kule minyaka idlulileyo ethe yatsala abathengi abaphezulu, ukusukela kumashishini amancinci ukuya kwiinkampani zeFortune 500. Namhlanje, i-Interserver ligama lekhaya elivelayo nanini na xa kukhankanywa iinkonzo zokubamba iwebhu.
Ukhuseleko luya kuba yeyona nto iphambili kuwe ukuba unomdla wokufumana lonke ulwazi olungena kwiwebhusayithi yakho. Ngezigidi zeefayile ezinobungozi kwi-intanethi, ukhuseleko luphawu olubaluleke kakhulu. I-InterServer ibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukwakha i-ironclad iwebhusayithi ekhuselekileyo, ekuboneleleni ngezixhobo eziyimfuneko ukuze uqonde ngokupheleleyo iimpawu zokhuseleko kwiwebhusayithi, ukukunika izixhobo ezifanelekileyo zokufumana izinto.
Umncedisi Ukhuseleko lwangaphakathi kwiFirewall isebenzisa ukufundwa komatshini ukubonelela ngokhuseleko oluphezulu kubathengi, ngenxa yoko kuthintela kunye nokukhusela abahlaseli abakhohlakeleyo. Eli nqaku liyafumaneka kuzo zonke izicwangciso ngokungagqibekanga.
Ukuqinisekisa umgaqo-nkqubo wokhuselo oluyi-2, abasebenzisi bavezwa zizixhobo zeModSecurity ezinikezela ngolunye uluhlu lwe ukukhusela umlilo kunye ne-InterSheild kwaye uhlala uskena ukuqhuba ngokusingathwa kweefayile ezisolisayo okanye ezinobungozi.
Omnye wemiceli mngeni ekuhlala kufikelelwa kuwo ngumda kwinani leendawo kunye neewebhusayithi ezinokwenziwa yinkonzo yokubamba enikiweyo. Ukujongana nale ngxaki, uya kunyanzeleka ukuba wenze enye iwebhusayithi encinci kwizithabazi okanye iwebhusayithi eyahlukileyo.
Kwiimeko ezinzima ngakumbi, usenokungabi nakho ukufikelela ngokupheleleyo kulwazi olufunekayo ukufaka umxholo weWindowsPress. I-InterServer ibekwe ngokukodwa ekuhanjisweni kwayo kweenkonzo njengoko zisusa lo mqobo, zibonelela abasebenzisi nge imimandla engenamda kwiiwebhusayithi. Ngala manqaku, abasebenzisi banokuzilungiselela zonke iiwebhusayithi kunye nezithambeka zabo phantsi kweseva enye, oko kwenza ukuba kube lula ukwakha kunye nokunye ukugcina.
Abasebenzisi banakho ukuba ngabanini kwaye basebenze inani elikhulu ledatha njengoko bafuna. Inkqubo ye- umphathi wesizinda yenza ukuba kube nakho ukongeza, ukususa, nokulawula imimandla eyongezelelweyo ngokwahlukeneyo, isenza ukuba sikwazi ukuqhuba iiwebhusayithi ezizimeleyo. Ukongeza, i-InterServer yenzelwe ukufikelela ngokulula, isenza ukuba kube lula kubasebenzisi ukuba bahambe ngokulula kulwazi olungenaxhala. Kuhlala kukho ukubonelelwa kokufumana uncedo ngabaphathi bethu abakhoyo nge-24 × 7 yokugqithisa eminye yemisebenzi yesiqhelo enje ngokulungiselela i-backups, ukufakwa kwe-OS, ukuphuculwa kwepatch yenethiwekhi kunye neenkqubo zokhuselo.
Ecaleni kwezokhuseleko, isantya kufuneka sibeke kwelona liphezulu phakathi kweempawu ekufuneka sijongile xa ukhetha inkonzo yokubamba. Kungenzeka ukuba urekhode izinga eliphezulu lokubhabha ukuba iwebhusayithi yakho ilayisha kancinci njengoko iindwendwe ziya kukufumanisa kunzima ukuqhubela phambili, ngenxa yoko baya kushiya emva kokundwendwela iphepha lokuqala.
I-InterServer ikukhusele, xa kufikwa kwisantya senethiwekhi! Kunye Isantya esiphakathi se-522 ms, I-InterServer ibonelela ngesona santya siphezulu kubanini bewebhusayithi, inika amava olonwabo.
I-InterServer iyakuqonda ukubaluleka kwe-intanethi ekhawulezayo, ngenxa yoko, bezimisele ukuphucula isantya kwiseva yabo inyanga nenyanga. Ukusuka idatha efunyenweyoIsantya sewebhusayithi ngoku sihleli kwi-522 ms, ngokuchasene ne-494 ms erekhodwe ngoNovemba 2019 ebonisa ubungqina bokukhula okuqhubekayo kunye nolwaneliseko oluphezulu lwabathengi.
Ukuba neakhawunti ye-imeyile yesiko kubaluleke njengenyathelo lenkqubo yokwenza uphawu lweemveliso kunye neenkonzo zakho nokuba sele kufikwa ekudibaneni neCRM efanelekileyo kwisizukulwane esikhokelayo. Ukufumana inkonzo yokubamba enikezela ngeenkonzo zangaphakathi ze-imeyile kuyinzuzo ukuxhomekeka kubanikezeli be-imeyile beqela lesithathu njengeGoogle Workspace (eyayisakuba yiGsuite) yeenkonzo ze-imeyile.
Enye yeempawu ezongezelelweyo abasebenzisi be-InterServer ekugqibeleni banandipha iinkonzo ze-imeyile zamahhala. InterServer ibonelela ngeakhawunti simahla kuzo zonke iiakhawunti ezibanjelweyo, evumela amashishini ukuba asete i-imeyile yecandelo lobungcali ukunceda ukugcina unxibelelana nabasele besele kwaye benokubakho abathengi.
I-InterServer ixabisa umxhasi wayo, njengoko kunjalo beqhayisa ngenye yeenkonzo zabathengi ezilungileyo. Unxibelelwano luphawu lobomi balo naliphi na iphulo kwaye lubalulekile kuloo nto, lubalulekile ekufezekiseni ukoneliseka kwabathengi.
Ukuphendula kwabathengi kwi-InterServer kuphendula imibuzo yabasebenzisi kwimizuzu engaphantsi kwemi-5, ukufumana imiba isonjululwe ngexesha elikhawulezayo. Ukongeza kwiNgxoxo ebukhoma, abasebenzisi banokufumana uncedo ngokundwendwela ii-InterServers ' okubelelwe elwazini okanye ukufikelela kwinkxaso yefowuni, ithikithi, kunye nokukhetha i-imeyile.
kunye InterServer, ngekhe uzikhathaze ngobungakanani bokugcina njengoko isicwangciso ngasinye siza nendawo yokugcina engenamda ye-SSD ukuhlangabezana neemfuno zemihla ngemihla ezikwi-intanethi. Uya kuba nexhala elincinci ekunciphiseni ubungakanani befayile okanye inani lolwazi oza kuluthatha kwi-Intanethi. Esi sisibonelelo esikhulu kwiiwebhusayithi ezinobuchule ezihlanganayo kunye nokugcina idatha enkulu okanye ulwazi mihla le.
Ngokusekwe kwingxelo yabo ethembekileyo yamava kunye namava omsebenzisi, i-Interserver yaziwa ngokuba yindawo yokwakha eyomeleleyo yokhuseleko eyenza ukuba ibe yindawo ephezulu yamagama amashishini amakhulu kwihlabathi liphela. Umphezulu wabo wemigangatho yokhuseleko lomgca, inkonzo ephezulu yabathengi, kulula ukuyisebenzisa ujongano kunye nesantya esiphezulu kwiwebhusayithi yokulayisha ixesha liyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo nolufanelekileyo kuzo zonke iintlobo zewebhusayithi.
Ekugqibeleni, uya kufuna ukunamathela kwinkampani yokubamba iwebhu ebonelela ngendawo yokugcina engenamda kunye nokuguquguquka xa kuziwa kulawulo lwee-subdomains kwiwebhusayithi yakho. Ngokukodwa ukuba ishishini lakho okanye umbutho ujonge ulwandiso olomeleleyo kungekudala.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Disemba 19, 2020
Isikhokelo semizuzu emi-3 esilula sokuqonda i-blockchain kunye nee-cryptocurrensets
Intengiso yeDijithali yemali
Imigodi yeedigital cryptocurrencies
Imali yeDijithali yemali
Ngaba luncedo kangakanani utyalomali lweCrypto?
Umthombo wesithombe: ISoFi.com
I-Cryptocurrensets yifomathi yedijithali yemali, ethetha ukuba zidijithali kuphela - akukho ngqekembe yomzimba okanye ibhili ekhutshiweyo. Yindlela yokutshintshiselana ngeempahla kunye neenkonzo. Njengenkqubo yemali yoontanga, i-cryptocurrencies awudingi abalamli ngaphambi kokuba badluliselwe phakathi kwabantu.
Bitcoin, eyokuqala neyona inkulu yedijithali yemali ngoqoqosho lwentengiso yasekwa emva kwengxaki yemali ka-2008. I-asethi eyaziwayo ye-crypto yenziwa ngumntu ongaziwayo okanye iqela labantu eliphantsi kwegama elibi uSatoshi Nakamoto.
Kukho iidigital zeedigital zemali phaya, ngakumbi zenziwa yonke imihla, nangona kunjalo i-Bitcoin (BTC), i-Ethereum (i-ETH) kunye ne-Tether USD (i-USDT) zezona zi-3 ziphambili ze-cryptocurrencies ezikhoyo. Oko ndafika kwimbalasane, iimpahla ze-crypto bebefumana umdla omkhulu-ukutsala abathengisi kunye nabadlali beziko.
Namhlanje, uninzi lwabarhwebi kunye namasango okuhlawula amkela iintlawulo ze-crypto-ukuququzelela iintlawulo ezilula nezilungele iimpahla kunye neenkonzo. Nangona uninzi lwamazwe lungenayo indawo ethambileyo crypto, blockchain, itekhnoloji esisiseko yeemali zokufumana imali ifumene ukwamkelwa okwandileyo kwizizwe zonke.
Iidijithali zemali zikhuselwe yi-cryptographic iholide iteknoloji ebizwa blockchain Oko kwenza ukuba ubungqina buphazamise kwaye bungaguquki. I-Bitcoin isombulula enye yeengxaki ezinkulu ezinxulumene nemali yedijithali-ingxaki yokuchitha kabini. Ngokuchaseneyo nenkqubo yemveli yemali, ii-cryptocurrensets azikhutshwa nangawuphi na umbutho ophakathi, yiyo loo nto ikhululekile kulawulo oluphambili kunye nasekukhohliseni.
Okokugqibela, ziyamelana nokunyanzelwa kwaye azinakuvalwa ngenxa yokuba zinikezelwe ikakhulu.
Iidijithali zemali thengiswa nokuba kukutshintshiselwano olusembindini okanye olusasazekileyo. Ukutshintshiselana nge-Crystal Okwangoku lelona galelo liphambili lokuhambisa imali yedatha ngelixa i-akhawunti enye yotshintshiselwano isenza ipesenti enkulu yevolumu yokuthengiswa kwemali kwiimali zothengiso.
Ukutshintshiselana phakathi (I-CEX) isebenza njengemakethi yesitokhwe yendabuko enendawo enye yolawulo. Njengolona tshintsho luqhelekileyo lufumanekayo kwaye kulula ukulusebenzisa, utshintshiselwano lwendawo enye luyimpikiswano njengoko ii-cryptocurrensets zithathwa njengezinikezelwe kwindibano.
Umbono wokubekwa kwindawo enye kuthetha ukuba umntu wesithathu okanye umntu ophakathi uqeshwe ekuqhubeni izinto zekrisimesi. Abarhwebi okanye abasebenzisi banikezela ngemali yabo kukhathalelo lomntu ophakathi njengoko bethatha inxaxheba kwimicimbi yemihla ngemihla. Kwiindawo zokutshintshiselana phakathi, ii-odolo ziyenziwa ngaphandle kwetyathanga.
Utshintshiselwano olunabileyo (I-DEXs) ngokuchaseneyo zichasene ngokuthe ngqo noogxa bazo abaphakathi. Intengiselwano kwi-DEX ziyenziwa kwikhonkco (ngekhontrakthi ehlakaniphileyo), ngamanye amagama abasebenzisi okanye abarhwebi abayithembi imali yabo ezandleni zomntu ophakathi okanye umntu wesithathu. Yonke iodolo (intengiselwano) ipapashwa kwi-blockchain -okungathandabuzekiyo yeyona ndlela icace gca kurhwebo lwe-cryptocurrency.
Olona phendlo kuphela kutshintshiselwano olusasazekayo kukuba kunokuba yinto enzima kakhulu kubasandulb entsha abanokuba nexesha elinzima lokuhamba kutshintshiselwano. Nangona kunjalo, isizukulwana esitsha se-DEX esingaKutshintshi, iSushiwap siyenze lula le nkqubo.
Basebenzisa abenzi beMarike abaZenzekelayo (i-AMM) ukubuyisela umxholo weeNcwadi zeOdolo. Kwimodeli ye-AMM, akukho abenzi okanye abathathi, Ngabasebenzisi kuphela abenza urhwebo. Njengoko sele kutshiwo, ii-DEX ezisekwe kwi-AMM ziluncedo ngakumbi. Zisetyenziswa ngokufanelekileyo kwaye ubukhulu becala zidityaniswe kwizipaji ezinje Trust Trust, IMetaMask kwaye ImToken.
Uninzi lwee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin zimbiwa. Imigodi yinkqubo eyenziweyo ukugqitywa kwemicimbi emitsha yedijithali kwaye iibhloko ezintsha zongezwa kwi-blockchain. Abavukuzi bafumana izikhuthazo zokuqinisekisa ukuthengiselana okanye ukongeza iibhloko ezintsha kwi-blockchain. Le yinkqubo yokhuphiswano, ukubakho kokumbiwa kwebhlokhi kuxhomekeke ikakhulu kwi hashing amandla Yekhompyutha yommbiwa.
Kwinethiwekhi yeBitcoin, umvuzo webhloko okwangoku zii-bitcoins ezingama-6.25. Kwibhloko nganye ekroliweyo, umgodi owongeze ibhloko uya kufumana ii-bitcoins ezingama-6.25. Amabhaso ayaqhubeka esiqingatha ngasinye seminyaka emine kwisiganeko esikhulu esibizwa I-Bitcoin Halving. Isiqingatha sokugqibela senzeke ngoMeyi 11, 2020, sinciphisa umvuzo ukusuka kwi-12.5 bitcoins ukuya kwi-6.25 bitcoins.
Ukongeza kwimivuzo yemigodi efunyenweyo, abasebenzi basezimayini bafumana kwakhona kwimirhumo yentengiselwano ehlawulwa ngabasebenzisi xa bethumela, bethengisa ii-cryptocurrensets. Ezi ntlawulo zinokuvela kwiisenti ezimbalwa ukuya kwiidola ezininzi.
Iikhompyuter zemigodi zithatha imicimbi kwi-echibini lokuthengiselana okulindelweyo, emva koko ziqhube itsheki ukuqinisekisa ukuba umsebenzisi unemali eyoneleyo yokugqibezela intengiselwano kunye nokutshekishwa kwesibini ukuqinisekisa ukuba intengiselwano yayigunyazisiwe ngokufanelekileyo.
Kwimeko apho loo msebenzisi engenamali yaneleyo yokuhlawula iifizi zentengiselwano, intengiselwano iya kubuyela kubasebenzisi njengothengiselwano olungaphumelelanga. Abavukuzi banamathuba amaninzi okuthatha ukuthengiselana kunye neerhafu ezinkulu zentengiselwano. Kungenxa yoko le nto ihlala ithathwa njalo 'emikhulu kwimirhumo, ngokukhawuleza kukuphunyezwa kwentengiselwano'.
Abasebenzisi beDijithali yemali banokukhetha phakathi kwe-Intanethi, ngaphandle kweintanethi okanye izipaji zekhompyutha. Kuxhomekeka kukhetho olwenzileyo lokuhlawula isipaji esinezona zinto zikhuselekileyo zilungile. Nangona izipaji zangaphandle nakwiintanethi zibonise ukuba zikhuselekile, iiwallet zekhompyuter ziyaziwa ngokubonelela ngokhuseleko oluphezulu kwiiasethi zakho zedijithali.
Iipaji ezikwi-Intanethi ngokubanzi zisimahla, zinokusebenziseka lula kwaye ziyafumaneka kwaye ngenxa yoko, zezona ndawo zisetyenziswa rhoqo kwimali ye-crypto. Kwangelo xesha, ngabona basesichengeni phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zewallet crypto. Ecaleni kwe isixhobo sekhompyutha, Isipaji esingaxhunyiwe kwi-intanethi sinikezela ngokhuseleko olungcono kwii-asethi zakho ze-crypto.
Ukuba usebenzisa isipaji se-cryptocurrency okokuqala ngqa, ukunamathela kwisipaji esikhuselekileyo kodwa esinokusebenziseka kufuneka ibe yeyona njongo yakho. Ukhuseleko oluphezulu, iiWallet zeHardware ezinje nge Ledger Nano X kucetyiswa ziingcali.
Ukuxhasa I-wallet ye-crypto yinkqubo ebalulekileyo ekukhuseleni ngokukhuselekileyo ii-asethi ze-crypto. Kwimeko apho ulahlekelwe zizipaji zikabani, iimali zinokufunyanwa ngokulula kwisipaji esitsha kusetyenziswa amaqhosha abucala okanye amagama agqithisiweyo afunyenwe ngasemva.
Ii-cryptocurrensets zithathwa njengezinto ezinokuguquguquka kakhulu, kwaye ngenxa yoko zixhomekeke kumaxabiso amakhulu. Kwithiyori, utyalo-mali oluphezulu lubeka umvuzo ophakamileyo, oku kuyinyani nakwii-cryptocurrensets ngokunjalo. Kwimeko apho imeko inokuvela, ilahleko eyenzekileyo inokuba buhlungu kakhulu. Yiyo loo nto abacebisi botyalo-mali beshumayela kubo 'Ungaze utyale imali ongazimiselanga kuyilahla nangaliphi na ixesha.'
Izinto ezinokubakho eziphezulu zihlala zingenasiphelo, iBitcoin yayithengisa nge- $ 1000 ekuqaleni kukaSeptemba ngo-2020 kwaye namhlanje ithengisa ngaphezulu kwe- $ 19k. Ngaphezulu kwe-6000 yeedigital cryptocurrens phaya, ifuna uhlalutyo oluninzi ukukhetha ingqekembe elungileyo okanye ithokheni enokubakho okuphezulu. Nangona kunjalo, amathuba okufumana inzuzo kwimarike yenkomo ahlala ephezulu kuba, njengoko i-aphorism eyaziwayo isithi, "Ukunyuka kwamaza kuphakamisa zonke izikhephe".
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Disemba 13, 2020
I-blockchain kunye neendaba ze-Cryptocurrency News 0
Iikhowudi zeendaba ze-Crypto neBlockchain: Iveki kaDisemba 10th 2020
Amagqabantshintshi e-Crypto: IMicroStrikhi ithenga i-bitcoin engaphezulu, i-India kwiirhafu zerhafu, uDow Jones ukumilisela ii-indexes ze-crypto, i-ETH Fund ukuya kwi-Toronto exchange stock, iGenesis Block ifumana i-OMG: kuninzi kwii-Crypto Highlights zale veki.
Izihloko eziphambili ze-Crypto ngu-Crypto Gator
Amabali aPhambili evekini
I-3 metrics eziphambili zokubukela njengexabiso leBitcoin lizama ngaphezulu kwe-20,000
Izicwangciso zaseIndiya kwiRhafu yeNgeniso evela kutyalo-mali lweBitcoin: Ingxelo
IMicrosoftStrategic Buys yongeza i-50M yeedola kwiBitcoin
Imvakalelo yentengiso yale Veki
I-S & P Dow Jones Indices yokuSungula ii-Index ze-Crypto ngo-2021
Ingxowa mali ka-Ethereum ukuya kwiToronto Stock Exchange
I-Hong Kong OTC ifemi yorhwebo ifumana iNethiwekhi ye-OMG
Amagqabantshintshi e-Crypto: IMicroStrikhi ithenga i-bitcoin engaphezulu, i-India kwiirhafu zerhafu, uDow Jones ukumilisela ii-indexes ze-crypto, i-ETH Fund ukuya kwi-Toronto exchange exchange, uGenesis Block ufumana i-OMG: kuninzi kwii-Crypto Highlights zale veki.
Apha eCrypto Gator; Imfundo yeCrypto kwaye iminyhadala ephezulu ejikeleze ishishini ihlala iyinxalenye yezinto eziphambili ngokubaluleka ukugcina abafundi bethu benolwazi kwaye bonwabisa. Amabali amaninzi anomdla kule ndawo iphambili ye-Crypto.
Izihloko eziphambili ze-Crypto Ngu I-Crypto Gator
Njengoko i-Bitcoin iqhubeka nokujikeleza i-19k uphawu, kukho iindlela ezintathu eziphambili zokugcina iliso kunyukelo olunokubakho okanye ukonakala.
Abaphathiswa abathathu bolawulo lwentando yesininzi bacebise umthetho oyilwayo oya kufuna ukuba abanikezeli be-solidcoin babhalise kwi-Federal Reserve kwaye bafumane nelayisensi yebhanki.
Umphathi wotyalo-mali we-asethi yedijithali waseCanada uza kuphehlelela i-IPO kule veki ukukhupha i-Ether Fund, ukuthembela okurhweba ngokutshintshiselana nge-Ethereum kwiToronto Stock Exchange (TSX).
Umthombo wesithombe: Isikolo se-AXX
Njengoko iintlanganiso zeBitcoin zisondele kumanqaku angama- $ 20k, abarhwebi bagcina ikhefu elinokubakho ngaphezulu kwe- $ 19k engingqi okanye ukuwa. Ummandla wama-20k owawusebenza njengeyona nto iphambili kunyaka ophelileyo wonyaka we-2017 wenkomo ngoku isebenza njengeyona ndawo iphambili enganyangekiyo kwengqondo kunye nee-odolo ezininzi zokuthengisa ezihlanganayo zommandla wonke.
Abarhwebi kuya kufuneka bajonge izinto eziphambili ukumisela imeko elandelayo enokwenzeka. Phezulu kwezinto zokugcina iliso ekugqibeleni ziya kujikeleza: ivolumu yokurhweba, umda omde ukuya kufutshane, kunye nokunyuka kwenqanaba lenkxaso-mali. Xa abathengisi (iibhulukhwe ezimfutshane) befuna ukuphakama okuphezulu, inqanaba lenkxaso-mali lihlala libi. Ngenxa yoko, abo barhwebi baya kuba behlawula iifizi. Kukuziqhelanisa nokulunga ukucinga ukuba inqanaba eliphezulu kakhulu lenkxaso-mali linokuthetha ukuba abathengisi babheja kwimarike yentengiso.
Uninzi lwabarhwebi balanda umthamo kuwo wonke indawo yokutshintshiselana, umthamo ophantsi uya kubonisa ukungabikho komdla okanye ukuzithemba kwintengiso. Kuyimfuneko ukuba uqaphele i-Bitcoin eyaphula ukunganyangeki okubalulekileyo kumthamo ophantsi. Inzala esempilweni kufuneka ikhatshwe yivolumu efanelekileyo.
Abahwebi baphinde bajonge umlinganiso "omde-ukuya-omfutshane" kumanqanaba aphambili otshintshiselwano. Lo mlinganiso ungahamba indlela ende ukumisela umkhombandlela wentengiso apho abathengisi babheja khona.
Izicwangciso zaseIndiya kwiRhafu yeNgeniso evela kutyalo-mali lweBitcoin: iReport
Ngophuhliso lwakutsha nje, abatyali mali beIndiya okanye abarhwebi kuya kufuneka baqale ukuhlawula irhafu kwinzuzo ekhutshwe kwizabelo zabo. Ngoku ka LoQoqosho Times (ET), I-India kuthiwa ijonge kwaye ilandelele abatyali mali be-crypto abaye bafumanisa iingeniso ezivela kwi-rally ye-bitcoin yakutshanje, inyathelo elijolise ekufezekiseni irhafu kwiimbuyekezo ezinjalo.
Ingxelo ityhola ukuba ngaphambi kokuvalwa kwemali ye-crypto yi-Reserve Bank ngo-Epreli 2018, isebe lerhafu lase-India lafumana ulwazi malunga nentengiso ye-bitcoin eyenziweyo ngamajelo ebhanki ngelo xesha. Nangona oku kuvalwa kwasuswa ngamanye amaxesha ngo-Epreli 2018.
Ingxelo iqhubeka ityhola ukuba abasemagunyeni baphinde babeke iliso kwinzuzo efunyanwa ngabatyali mali be-crypto besebenzisa i-KYC / AML yokutshintshiselana ngokuhambelana neCoinDCX kunye nokusebenzisa ikhadi le-PAN, incwadi yesazisi.
Nangona, ipesenti erhafiswayo ayikatyhilwa okwangoku uninzi lweengcali ziqikelela ukuba kunokwenzeka iipesenti ezingama-30 zerhafu kwinzuzo ye-crypto. Uninzi lwabatyalomali bayacetyiswa ukuba bafayilishe izibonelelo zabo ze-crypto njengemali eyinzuzo ehambelana nezitokhwe. Kwingxelo yephephandaba, u-Amit Maheshwari waphawula oko Bitcoin urhwebo olusebenzayo inokuphathwa njengeshishini lokuqikelela kwaye ngenxa yoko iya kuxhomekeka kwiirhafu eziqhelekileyo.
IMicrosoftStrategic Buys yongeze i- $ 50M kwiBitcoin
IMicroStr Strategy kaMichael Saylor ihlala imnandi kwiBitcoin njengoko ifemu yezobukrelekrele yaseMelika itsala enye $ 50 yezigidi kwimpahla yedijithali. Njengoko kuqinisekisiwe kwi-tweet yenziwe yi-CEO, ifemu ithenge malunga ne-2,574 bitcoins nge-50.0 yezigidi zeedola ezinkozo ngokuhambelana noMgaqo-nkqubo woVimba kaNondyebo, ngexabiso eliphakathi elimalunga ne- $ 19,427 nge-bitcoin nganye.
Ukulandela oku kushukuma kutsha nje, i-firm ngoku iqhayisa nge-40,824 bitcoins iyonke. IMicroStrikhi yaqala yathenga iBitcoin eyi- $ 250 yezigidi nge-11 ka-Agasti, ilandelwa kukuthengwa okongeziweyo kwe- $ 175 yezigidi kwinyanga kamva. Oku kuthenga wabulawa ngokutshintshiselana kwe-Coinbase yase-US ekhokelayo.
Ukusukela ukubhengeza isigqibo sokuthenga ezinye i-bitcoins ngasekupheleni kukaJulayi kulo nyaka, isitokhwe esomeleleyo (i-NASDAQ: MSTR) sikhuphele ngaphezulu kwe-170%. Uninzi lwabantu ngoku lukhetha ukubiza inkampani ukuba i-de-facto ingxowa-mali yokurhweba ngokutshintshiselana.
Umthetho oYilwayo omtsha wase-US uya kuyenza ukuba ibe ngokungekho mthethweni ukukhupha ii-Stablecoins ngaphandle kwe-Federal RUkuvunywa kokugcina
Isindululo esitsha kwaziswa umthetho oyilwayo ngabenzi bomthetho abathathu baseMelika bajolise kubanikezeli be-solidcoin, umthetho oyilwayo ubekwe phantsi ukuze ubanike ababoneleli babucala be-solidcoin ekufumaneni i-charter charter okanye ilayisensi kunye nokufumana imvume kwi-Federal Reserve ngaphambi kokuba babe nakho ukukhupha ii-solidcoins.
Umthetho osayilwayo waziswa ngabaphengululi abathathu beDemokhrasi: URashida Tlaib, ngenkxaso evela kuReps. Jesús García noStephen Lynch. Olu phuhliso luza kufuna ukuba nabaphi na abanikezeli be-solidcoin banikwe i-inshurensi ye-FDIC okanye "kungenjalo bagcine uvimba kwiFederal Reserve ukuqinisekisa ukuba zonke ii-solidcoins zinokuguqulwa ngokulula zibe ziidola zaseMelika, xa zifunwa."
Isitampu salo mthetho uyilwayo siya kufuna ukuba abavelisi beemali ezizinzileyo babucala babe phantsi kweliso ngqo leFederal Reserve. Oko kuyinxalenye kuba "ichaza ngokungagungqiyo ii-solidcoins njengedipozithi phantsi komthetho womdibaniso," uRohan Grey tweeted.
I-Stablecoins zii-crypto-asethi ezixhaswe yimali ye-fiat okanye ibhasikithi yezinye iimali. Ezi mpahla zinokuxhaswa ziidola zaseMelika, i-Euro, okanye nayiphi na imali eyaziwayo. I-Stablecoins yinxalenye ebalulekileyo yomzi mveliso we-crypto njengoko bengahlali bengoxinzelelo olunxulunyaniswa nezinye ii-asethi ze-crypto.
Imveliso yezemali ye-Crypto iqhubekile nokwenza amaza kulo nyaka kunye needesika eziphezulu zokurhweba ngokwesiko kunye neefemu ezisungula iinkonzo ezisekwe kwi-crypto. Kuphuhliso lwakutsha nje, inkampani enkulu yedatha yezemali i-S & P Dow Jones Indices isendleleni yokuqalisa ii-indexes ze-crypto ngo-2021. isibhengezo yenziwe yinkampani, bakwindlela yokuphehlelela inkonzo yokwenza isalathiso yedijithali ngokubambisana nomnikezeli wedatha we-crypto uLukka ngo-2021.
"Besijonge indawo ye-asethi yedijithali kwaye sivakalelwa kukuba kwinqanaba lomdla weziko ekukhuleni, apho iinkampani ezinjengezethu zifuna ukungena zize zenze igalelo ekubonakaleni kwendawo yentengiso," utshilo uPeter Roffman, intloko yehlabathi yezobugcisa kunye nesicwangciso kwi-S & P Dow Jones Indices.
Iimpawu zeCrypto azikho ntsha kwaphela. Ukusukela ngo-2018, Isalathiso seGlobal Crypto Index yeBloomberg kuye kwaziwa ngokunika iikowuti kwiimpahla ze-crypto ezinamanzi. Utshintshiselwano lwesitokhwe lwaseNasdaq lukwadwelise ii-indices ezimbalwa ze-crypto kwixa elidlulileyo.
Le ntshukumo ibonisa ukungena kwe-S & P enkulu kwisalathiso se-crypto. Ukujonga amanyathelo awathatyathwa yinkampani kwixa elidlulileyo ekuqeshweni kweenjineli ze-blockchain, banokubakho ngokwabo ukwenza imali ngakumbi kwi-blockchain nakwindawo ye-cryptocurrency. Esi sithuba sinokulungiselela ukhuphiswano olunamandla oluya kuthi ekugqibeleni lube lukhulu kushishino.
Ingxowa mali ka-Ethereum ukuya kwi-Toronto Stock Exchngelosi
Ukwamkelwa kweemveliso ezikhutshwe ngu-Ethereum kuyaqhubeka kushushu. Kuphuhliso lwakutsha nje, umphathi wezemali wedijithali waseCanada uza kuphehlelela i-IPO kule veki ukukhupha i-Ether Fund, ukuthembela okurhweba ngokutshintshiselana nge-Ethereum kwiToronto Stock Exchange (TSX). Ingxowa-mali ye-ETH iya kudweliswa phantsi kwe-ticker QETH.U. Olu phuhliso lwaqala ukukhulelwa nguVitalik Buterin e-Ontario.
Ityala liza kubonisa ukunikezelwa okuphezulu kwe- $ 100 yezigidi eziza kuvulwa kude kube ngu-Disemba 12, 2020. Inkampani ekhupha i-3iQ iyaqhayisa ngaphezulu kwe- $ 400 yezigidi ze-CAD kulawulo lwee-asethi, eyona nto igxile kuyo kukukhupha iimveliso ezinxulumene neBitcoin, i-Ethereum, kunye neLitecoin.
Alithandabuzeki elokuba le ndlela yotyalo-mali yenye yeendlela zotyalo-mali ezikhethiweyo kubarhwebi nakubatyalomali abanokuthi bangafuni ukuyeka ukhetho lwabo kunye nokugcinwa kwemali kwi-cryptocurrency.
Kwiinyanga ezidlulileyo kungqine ulungelelwaniso lwenkxaso mali entsha nangaphandle kolu shishino. Ngaxesha lithile ngo-Novemba, kuthiwa yingxilimbela yeGold VanEck yaqala a I-Bitcoin imveliso yokurhweba ngokurhweba eJamani. Ngokuqinisekileyo oku kuseta ithoni yabadlali abaninzi ukuba bajoyine indawo.
Ifemu yokurhweba ye-Hong Kong OTC ifumana i-OMG Netwi-ork
I-OMG isendleleni yotshintsho oluninzi njengoko inkampani ye-OTC esekwe e-Hong Kong iGenesis Block ifumana iprojekthi eyaziwayo. I-OMG ayisosigcini, ungqimba-2 isisombululo sokulinganisa esakhelwe i-Ethereum blockchain. Oku kufunyanwa kwaba yaziwe ngoDisemba 3. IGenesis Block Ventures iqaphele ukuba bazimisele ukusebenza ne-OMG ukwakha "amaqonga okubolekisa nokuthengisa" kwisithuba seDeFi.
Oku kufunyanwa ekugqibeleni kuya kuvumela inkampani ukuba inyuse unxibelelwano lwayo kwishishini le-blockchain laseAsia ukukhawulezisa uphuhliso ngaphakathi kwenethiwekhi ye-OMG, ukufikelela kubambiswano olunokubakho oluza kuxhamla indalo. NgokukaGenesis Block, bathathe inxaxheba ngokunzulu kwisithuba seDeFi kulo nyaka, besakha ubudlelwane obubalulekileyo kunye ne-FTX kunye neBinance.
Kwimeko apho ungazi, Ibhlokhi yeGenesis yaqala ngo-2017 njengeqonga lezorhwebo elise-Hong Kong, isungula ii-ATM ze-cryptocurrency kunye nezixhobo zemigodi. Kwiflip, i-OMG yayisaziwa njenge-Omisego kodwa kamva yaphinda yaziwa ngoJuni 2020. Iprojekthi yiprojekthi eyaziwayo ye-cryptocurrency eyasungula ngo-2017.
Njengeqonga lesibini leqweqwe, i-OMG iphumeza ukuya kuthi ga kwi-4,000 yokudluliselwa kwethokheni ngomzuzwana, inethiwekhi ekhawulezayo ngokumangalisayo xa ithelekiswa nenethiwekhi ye-ETH. Oku kufunyanwa kunokuseta ithoni yokuhamba okukhulu ngaphakathi kwenkqubo ye-OMG.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Disemba 10, 2020
Iikhowudi zeendaba ze-Crypto neBlockchain: Iveki kaDisemba 3rd 2020
Amagqabantshintshi e-Crypto neBlockchain: Iibhlorho zentengiso zeBitcoin i-ATH, i-ETH 2.0 yomhla wokumiliselwa iqinisekisiwe, i-XRP inyuka ukuya kwiminyaka emi-2 ephezulu, i-PayPal ihamba kakhulu kwiBitcoin, S. Korea ishukumisela ukuba kuthintelwe iimfihlo zemali; Kukho okungakumbi kule ndawo iphambili kule Crypto.
Amabali aPhezulu kuwo onke amaShishini
I-Ethereum 2.0 iqinisekisiwe ngo-Disemba 1 ukumiliselwa kwiiyure nje ngaphambi komhla wokugqibela
ISingapore iphonononga i-CBDC ethengisa yonke into, utshilo umphathi wengingqi
Iingqekembe zaBucala ziya kuvinjelwa eMzantsi Korea I-Crypto yoTshintshiselwano kunyaka olandelayo
Ukusebenzisana kwi-DeFi kukufumana ngokukhawuleza
Ukusongelwa kweNtengiso kule Veki
Ikhredithi yemarike yeBitcoin ibetha ixesha elitsha liphela kwaye igqitha ngeJPMorgan kwi- $ 352B
I-Paypal ithengwe i-70% yazo zonke izinto ezisandul 'ukwenziwa kwiBitcoin kwinyanga ephelileyo njengeeMfuno zeeRocket
Ukunyuka kwamaxabiso eXRP ukuya kwi-2-yoNyaka ePhakamileyo njenge-Airdrop Frenzy Yakha
I-Crypto kunye neBlockchain Iimbalasane: Iibhlorho zentengiso zeBitcoin i-ATH, i-ETH 2.0 yomhla wokumiliselwa iqinisekisiwe, i-XRP inyuka ukuya kwiminyaka emi-2 ephezulu, i-PayPal ihamba kakhulu kwiBitcoin, S. Korea ishukumisela ukuvala iimfihlo zemali; Kukho okungakumbi kule ndawo iphambili kule Crypto.
Izihloko eziphambili ze-Crypto Ngu Ikhalaukuya eGator
Ukulandela imeko ye-bullish kunye ne-Spark ephakanyisiweyo yomoya kubanini be-XRP, i-XRP iye yahlangana yabetha i-0.79 yeedola, iseta unyaka omtsha we-2.
Ngaphandle kokuqala kancinci kwediphozithi yabasebenzisi kwidilesi yesivumelwano se-ETH 2.0, umhla wokugqibela wahlangatyezwa kanye ngexesha, eqinisekisa ukubakho kwebhloko ye-genesis ngoDisemba 1.
I-PayPal kunye ne-Square ye-CashApp kuthiwa bathenga ngaphezulu kwe-100% yeBitcoin entsha.
U-Ethereum 2.0 uqinisekisile ngo-Disemba 1 ukumiliselwa kwiiyure nje ngaphambi kokuba afemna
Ukulinda kugqityiwe! Emva kweminyaka emi-5 yomsebenzi onzima kwi-ETH 2.0, ubungqina benethiwekhi (POS) yenethiwekhi buqinisekisiwe ukumiliselwa ngoDisemba 1. Ikhontrakthi yedipozithi ye-Ethereum idibene neekhrayitheriya zayo zokufaka imali kwiiyure nje ezisithoba ukuya kumhla obekiweyo, malunga ne-524,288 Ether efakwe zii-16,384 iziqinisekiso kwisivumelwano, iphakamisa ithemba lokuba ibhloko ye-Ethereum iya kwenzeka nge-1 kaDisemba.
Ngaphandle kwenzala ephantsi ebikhatshwa kukuthatha inxaxheba, ukugqithisela kwikhontrakthi yediphozithi kuqinise nje iiyure ezimbalwa kumhla obekiweyo. Oku kuzisa i-ecosystem kwisiqalo esitsha sexesha elitsha, ukuhambisa inethiwekhi ye-ETH kubungqina bomsebenzi (PoW) kubungqina besibonda (PoS).
Njengoko sele kwaziwa, abathathi-nxaxheba be-genesis abayi kuba nakho ukurhoxisa i-ETH yabo ebekiweyo de i-ETH 2.0 isungule kwiSigaba 1.5; ukuphuculwa kwakuthetha ukudibanisa isiseko se-Ethereum kunye ne-ETH2's Beacon Chain kunye nokusingqongileyo okuphucukileyo.
Kwakhona, uninzi lwabanini be-ETH lindele kubantu besithathu ukuba baqalise iinkonzo zokurhoxa ezenzelwe ukurhoxa, bengakhathaleli ukuba kunokwenzeka ukuphuma kobuqhetseba.
ISingapore iphonononga ukuba ngubanikwangaphambili CBDC, umphathi wengingqi uthi
Emva kweBitcoin kunye ne-Ethereum 2.0, eyona projekthi ithethwayo kakhulu yiprojekthi ye-CBDC ecetyiswe yiBhanki eNkulu yamazwe amaninzi. Nge-China sele ivavanya i-Yuan yedijithali, iSingapore ngoku iphonononga amathuba emali esembindini yeMali yeDigital Bank (CBDC).
Umlawuli wezezimali kunye negosa eliyintloko le-Fintech kwibhanki eseSingapore eseSopnendu Mohanty kuthiwa uxelele uCointelegraph ukuba iSingapore iphonononga iVenkile enkulu yeDigital Bank okanye i-CBDC. U-Mohanty uqinisekisile ukuba akukho mfuneko encinci yokuthengisa i-CBDC, inkqubo yentlawulo eSingapore sele yakhelwe ukukhuthaza iinkonzo zokuhlawula ngokukhawuleza kunye nexabiso eliphantsi phakathi kwabemi.
Kananjalo, iSingapore ijolise kakhulu ekuphuhliseni i-CBDC ethengisa yonke into kunokuba ithengise i-CBDC, eya kuba luncedo ekuqhubeni ukuhlawulwa kwezokhuseleko kunye neentlawulo kumaziko emali.
"Andicingi ukuba kufuneka senze olunye uvavanyo kwii-CBDC ezinkulu," utshilo uMohanty. "Ngoku, kufanele ukuba siqale ukucinga ngokuya kwimveliso."
Egqabaza ngesakhelo solawulo esiseSingapore, uMohanty waphinda wathi ilizwe linomgaqo-sikhokelo ocacileyo osele ukho nowenza ukuba ibe yeyona ndawo ifanelekileyo kuye nabani na oceba ukumilisela ishishini lokugcina imali ngokusemthethweni.
Iingqekembe zaBucala ziya kuvinjelwa eMzantsi Korea I-Crypto yoTshintshiselwano ngokulandelayoar
Amehlo abalawuli athe ajongana neengqekembe zemali zabucala njengoko ubukhulu becala zingenakulandeleka kwaye ngenxa yoko ziye zaba zezona zikhethwayo kwizenzo zokuba kuthengiswe ngokungekho mthethweni. Ukuxhomekeka ekuqaleni isaziso ekuqaleni kuka-Novemba, iKhomishini yeNkonzo yezeMali eMzantsi Korea ikubeke kwacaca ukuba abayi kuyinyamezela nayiphi na intsebenzo ebandakanya naziphi na iiasethi zedijithali ezinceda ukuhlanjwa kwemali.
Olu hlaziyo lukhutshwe njengenxalenye ebalulekileyo yeenkqubo ezikhoyo ezilawula umthetho wentlawulo ekhethekileyo eMzantsi Korea. Lo mmiselo wenzelwe ukucofa imisebenzi yeemali zabucala kwingingqi. “Ingqekembe emnyama” njengoko kwakusithiwa ibizwa njalo yaqaqanjiswa ngokukodwa kumaxwebhu olawulo akhutshiweyo.
Iqela lichaze ukuba intengiselwano evela kwiiasethi zedijithali ubukhulu becala ayinakulandelwa kwaye ngenxa yoko kunzima kakhulu ukulandela umkhondo wezenzo ezingekho mthethweni ezenziwa kusetyenziswa ezo asethi. Isiphumo salo mgaqo sinokuba neziphumo ezibi ekusetyenzisweni kweemali zabucala ezinjengeMonero, iDash, iZcash, njl.
Lo mthetho kulindeleke ukuba unyanzeliswe ngo-Matshi 2021. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ngo-Septemba, ukukhokelela kutshintsho oluphuma kwi-OKEx kuyekile ukuxhasa inkxaso ye-Zcash kunye ne-Dash yokurhweba nge-asethi kwiqonga layo ukuze ithobele izikhokelo esele zicetywayo ezibekwe liqela labasebenzi.
Ukusebenzisana kwi-DeFi kukufumana iTripio ekhawulezayon
Imali eyabelwe imali (i-DeFi) Ufumene uninzi lokutsala kunye nomdla kwiintsuku ezidlulileyo njengexabiso lilonke elitshixiweyo (i-TVL) kwiiprotocol ezinkulu Kutshanje ubethe ixesha elipheleleyo $ 14.4 yezigidigidi. Ngelixa i-Ethereum ibambe elona xabiso likhulu, ezinye iibhlokhi zikhuphuka ukuya kumnyhadala ngokusebenzisana kwiziko lolu tshintsho lweparadigm.
Ukungasebenzi yinto ebalulekileyo ye-ikhosistim, ucinga ukuba inkulu kangakanani Defi ubume bendawo buya kuba, akukho mathandabuzo okuba u-Ethereum akazukukwazi ukubamba ixabiso elikhulu kangaka. Okokuqala, besisongele i-Bitcoin (WBTC), ngoku ezinye iibhlokhi sele zisungula umqondiso osongelweyo wokubamba ixabiso kwicandelo elikhulayo.
Iibhloko ze-blockchains ezinjenge-Wave, i-NEM ithathe le ndlela ukuseka ukusebenza kwendalo ngaphakathi kwenethiwekhi ye-Ethereum ngelixa i-Equilibrium isakha phezu kwePolkadot. Oku kuyakwenza ukuba ekugqibeleni abasebenzisi babambe uphawu lwabo lwendalo kuhlobo olusongelweyo lweasethi yemveli.
Ikhredithi yemakethi ye-Bitcoin ihlasela ixesha elitsha lonke ixesha aNdidlula iJPMorgan kwi- $ 352B
Ukulandela i-rally yangoku yeBitcoin, i-asethi yedijithali iye yagqwesa i-JPMorgan ngokwemali yentengiso njengoko ibetha ixesha elitsha lonke. Iiveki zamva nje bezinomdla kwiBitcoin njengoko iqhubeka nokubaleka kwayo ngokuqhekeza ukunganyangeki okukhulu njengoko ihlangana kufutshane nexabiso elitsha lonke ixesha.
Nangona Bitcoin ayikabizi ixabiso elitsha ngalo lonke ixesha, i-asethi ebekekileyo sele iqhekeze imali eyinkunzi yexesha eliphambili, ngokuqhekeza uphawu lwe- $ 352 yezigidigidi ngoku ethengisa ngaphezulu kwe- $ 19k nge-bitcoin ngoNovemba 25.
Ukuthembela idatha efunyenweyo ukusuka kwiMicro Trends, Intloko yentengiso yebhanki enkulu yase-US i-JPMorgan ivaliwe nge-349 yezigidigidi zeedola ngo-Novemba ngo-23 ngelixa ikepathi yentengiso yeBitcoin inyuselwa kuluhlu lwama-352 ezigidi zeedola.
Khumbula ukuba uJamie Dimon u-CEO we-JPMorgan ube ngumgxeki omkhulu weBitcoin, ebiza I-asethi yedijithali 'ubuqhetseba' ubuyile ngo-2017, nto leyo ikhokelele ekubeni iBitcoin iphume ngamandla, irekhodishe ilahleko enamanani aphindwe kabini. Nangona uluvo lwakhe lwasesidlangalaleni malunga neBitcoin alutshintshanga kangako, kukho iingxelo zokuba iJPMorgan inesitokhwe esikhulu seBitcoin emva kokuba kusungulwe iJPMcoin.
Ngaphandle kokugxekwa, uJPMorgan Kuthiwa uxelelwe abatyali mali bakhe ukuba "imeko yexesha elide enokubakho yeBitcoin iyaqwalaseleka," iphakamisa ukuba iasethi yedijithali inokulungiswa ngaphezulu.
I-Paypal ithengwe i-70% yazo zonke izinto ezisandul 'ukwenziwa kwiBitcoin kwinyanga ephelileyo njengeRandi yeRandis
Ukungena kwe-PayPal kwi-cryptocurrency eyamkelweyo yirali enkulu ibiyintsomi, ukutsho nje okuncinci. Ibali lakutshanje linayo iPayPal kuthiwa uthenge phantse I-70% yayo yonke iBitcoin esandula ukumbiwa ukusukela oko isigebenga sentlawulo sisungule inkonzo ye-cryptocurrency. Ngokwembono ebanzi, iCashApp yesikwere kunye nePayPal zithengile ngaphezulu kwe-100% yazo zonke i-Bitcoin ezisandula ukwenziwa.
Ukusukela oko wabhengeza ngo-Okthobha ukuba abasebenzisi be-PayPal abazizigidi ezingama-300 baya kuba nakho ukuthenga ii-cryptocurrensets, ixabiso leBitcoin liye lahlangana, laphula i $ 12k ngelo xesha. Idatha ityhila ukuba i-rally yeBitcoin yakutshanje iqhutywa ngabathengi beziko. Malunga neefemu ezingama-21 kubandakanya iGlass Digital Holdings kunye neMicrostrategy Inc, ziye zaqokelela i-14.42 yezigidigidi ze-BTC kwindawo yazo. Oku kubala ngaphezulu kwe-4% yonikezelo olujikelezayo lweBitcoin.
Ipesenti enkulu yeodolo enkulu yokuthenga yenzekile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, inyusa ixabiso leasethi yedijithali ephezulu. Unikezelo olunqongopheleyo lweBitcoin, oludityaniswe nesiqingatha sakutshanje esinciphise izinga lokukhutshwa kweBitcoin libe negalelo elikhulu kwiirali zamaxabiso phakathi kwemfuno eyandayo evela kubatyali mali beziko kunye nabathengisi.
Ukunyuka kwamaxabiso eXRP ukuya kwi-2-yoNyaka ePhakamileyo njenge-Airdrop Frenzy Builds
Njengoko i-XRP ihlangana i-2 yonyaka ophakamileyo, i-Spark airdrop inokuba yinxalenye ye-catalyst eqhuba le ntshukumo iphambeneyo. I-XRP okwangoku urhwebo ujikeleze i-0.54 yeedola emva kokufikelela kwi-0.79 ephezulu yeedola ukusuka kwi-low yeedola 0.3 ebonwe kwiveki ephelileyo. Into enomdla kukuba, i-XRP iye yahlangana ukuze iphinde ibuyise indawo yayo njengeyona mali yesithathu ngobukhulu ngokwenziwa kwemali emva kweBitcoin.
ezi yakutshanje Amanqanaba aphezulu awazange abonwe ukusukela nge-10 kaMeyi ka-2018. Ukulandela le rally, idatha ekwi-chain ibonisa ukuba inani leeakhawunti zeXRP nazo zonyukile. I-XRP Ledger ibonisa ukwanda ngama-200%, ukufikelela kwirekhodi engama-5,562 kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo.
Uninzi lwabahlalutyi ngoku banxibelelanisa le rally kunye ne-airdrop ecetywayo yethokheni 'yeSpark', ithokheni yemveli yesivumelwano seqonga lesivumelwano seFlare Network. Iithokheni ze-Spark ezingama-45 ezigidigidi ziya kubanjwa ngeenqwelo moya kubanini be-XRP ngomhla we-12 kuDisemba kwaye ixhaswe yingalo yotyalo-mali kaRipple RippleX (eyayisakuba yiXpring).
Inethiwekhi yokuThambisa yi umthetho olandelwayo sele idityanisiwe noMatshini oSebenzayo we-Ethereum owenza ukuba izicelo ze-Ethereum zisasazwe ngokubanzi (i-DApps) ukuba zithunyelwe kwiFlare ukuxhasa i-XRP ecosystem.
Ngokuhambelana nokunyuka kwamaxabiso, kuye kwakho intengiselwano enkulu engenayo ukuya kuthi ga ngaphezulu kwe-2.3 yezigidigidi zeXRP ezithunyelwa kutshintshiselwano. Le datha ibonisa ukuba uninzi lwabanini sele bebhukishe inzuzo kwi-rally yakutshanje.
Amagqabantshintshi e-Crypto: Iveki ka-Novemba ka-20
Amagqabantshintshi e-Crypto: I-PayPal BTC yokurekhoda ivolumu yokuthengisa kwiBinance.US, iBitcoin ATM inyuke nge-85% kulo nyaka, i-7.6B yeedola ibiwe kwi-crypto ukusukela ngo-2011, ixabiso le-DeFi protocol langena, kodwa enye ifolokhwe ye-BCH: Kukho okungakumbi okuqaqanjisiweyo kule veki ye-crypto.
Inkonzo yokuTshintshiselana nge-Crypto eyaziswa yiBhanki eNkulu yaseBelarus
Ixabiso le-DeFi Protocol ihlupheke kwi-Six Million yeDola.
Intengiso yeDeFi yokuNxibelelana neeaseti zehlabathi lokwenyani zezoQoqosho
I-Bitcoin Cash Hard Fork Goes Live, ngaba abanini be-BCH bazakufumana imali entsha?
Abagculi kunye nabaqhathi baye baGweba i-7.6 yezigidigidi zeedola kwi-Crypto ukusukela ngo-2011
Ukutshixwa kweCoronavirus kuqhuba ukwamkelwa kweeBitcoin ATM ezikhuphuke nge-85%
I-DeFi ingxaki: Inani elipheleleyo lomsebenzisi ukuya kuma-55% kwiiveki nje ezintandathu
I-PayPal ifikelela kwi-85% yeBinance.US yevolumu kwinyanga yokuqala
Inkonzo yokutshintshiselana nge-Crypto Yaziswa yi-Belarus 'Largest Bank
Ngenye imini yayiyibhanki eSingapore, ngoku iBelarus isezindabeni; sele iziko 'i-FOMO' sele iqalile?
Eyona bhanki inkulu eBelarus, iBelarusBank isandula ukubhengeza ngokusungulwa kweenkonzo zokutshintshiselana nge-imali yedatha. Iinkonzo ezamkelweyo zijolise ekuququzeleleni ukufikelela kusetyenziso lwemali engaphenduliyo. Ivumela umntu ukuba enze ngokulula Thenga i-BTC (Bitcoin) ngokutshintshiselana ngeemali ze-Fiat ezifana nedola yaseMelika (i-USD), iRussian Ruble (RUB) kunye ne-Belarusian Ruble (BYN).
Iitranskripshini zaseBelarusbank zisekwe kwixabiso elifanelekileyo lemarike ngexesha lokuthengiselana. Iinkcukacha zenkonzo njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi kaWhitebird ithi le nkonzo iza kuqhutywa ngekhompyutha. Ukuthenga kunye neenkqubo zentengiso ziya kwenziwa kusetyenziswa amakhadi okuhlawula iVisa.
"Ukurhweba ngeBitcoin usebenzisa ii-Euro kungekudala kuza kongezwa kuluhlu" kutsho iBelarusBank.
Imithombo yeendaba yasekuhlaleni ityhila ukuba iinkonzo zazijolise kubemi baseRussia naseBelarus. Nangona kunjalo, izicwangciso ziyaqhubeka ukwandisa isiseko sabathengi kwixa elizayo. I-BelarusBank iphinda icwangcise ukubandakanya i-Whitebird ukuxhasa ibhanki ekunikezeleni ngezinye iinkonzo ezinxulumene ne-cryptocurrencies kubathengi bayo.
Ii-hacks ze-DeFi bezikhule ngo-2020, ukusuka kwi-bZx protocol hack ukuya eAkropolis. Ngoku Ixabiso leDeFi isematheni ngenxa yezizathu ezingalunganga.
Ixabiso leDeFi ulahlekelwe zizigidi ezi-6 zeedola ukuze abone abo baxhaphaza imali mboleko. NgoLwesihlanu, umsonto ku-Twitter ubonise ubunzima yokusingatha yemali mboleko yomhlaseli ohlasele imali eqikelelwa kwizigidi ezithandathu zeedola.
U-Emilio Frangella utsalele ingqalelo kwisicelo semali-mboleko esikhulu se-80,000ETH esivela kwi-Aave esibalelwa kwi- $ 36 yezigidi nge-14 kaNovemba ka-2020. “Olu lolona hlaselo lunzima kakhulu endakha ndalubona”, utshilo ozichaze njengomgculeli omhlophe kunye nomseki IDeFi yase-Itali.
Ixabiso leDeFi Ithokheni yaphosa ama-25% ukusuka kwi-2.73 ukuya kwi-2.01 ngexesha lokushicilela ngenxa yokuxhaphaza. Kwesi siganeko indawo ezinzileyo zamaxabiso axhonyiweyo zixhaphakile ukuya kuthi ga kwi-6 yezigidi zeedola. Ukungavisisani kwabahlali kuyakuvuma ukuxhaphaza kwaye bacele ixesha lokuba basebenze kwiMultStable vault fixes.
Abahlaseli basebenzise i-0.31ETH yeedola kwinzuzo eyenziweyo, ukuthumela umyalezo kumhambisi weprotocol idilesi, esithi: "Ngaba uyayazi ngokwenene imali mboleko?" Njengokuhlaselwa kweDeFi kunyuka, uStani Kulechov weAave uphawule ku-Twitter ukuba "ukwakha i-DeFi eyomeleleyo kuya kusiba nzima".
Intengiso yeDeFi yokuNxibelelana neeaseti zehlabathi zoQoqosho Gii-ains
Kunyaka ophelileyo, ilizwe lezemali lifumene ukunyuka kwezemali okanye iDeFi ngaphezulu kwe- $ 13 yezigidigidi TVL(Ixabiso lilonke litshixiwe). Njengesakhelo setekhnoloji, iDeFi ibonakalise kwihlabathi amandla ayo okumangalisa okuguqula ukufikelela kwimali mboleko yeshishini.
Inkqubo ye-DeFi ibonelela ngesisombululo esiphumeleleyo kuzo zombini crypto abanini ngokusebenzisa iindlela zokukhuthaza, ukulima imveliso kunye nababolekisi ngokufikelela kwimali mboleko ngendlela efanelekileyo.
Okokuqala, ukungazinzi okuphezulu kunye nokubambelela ngaphezulu kubangele imiceli mngeni kwimali mboleko yeDeFi. Ukuguquguquka kwesibambiso kwakhokelela kwilahleko ye- $ 6.5 yezigidi ze-DAI kaMAKER yedwa kwaye kunokubakho iimeko ezifanayo kwixesha elizayo. Okwesibini, ukungakwazi kwamashishini emveli ukuboleka kwi-DeFi kunye nokuhamba kwemali yokwenyani emva kweethokheni zomgaqo-nkqubo kubangela ukubuyela umva okukhulu.
Ukuqhubela phambili, abacebisi bakholelwa ukuba intengiso yeDeFi ikwimfuno engathethekiyo yokwakha kwakhona izakhiwo kunye neenkqubo ezinokuthi zivale umsantsa namashishini emveli. Kufuneka kubekho unxibelelwano olungenamthungo phakathi kweDeFi kunye neCeFi ukuze iimveliso ezisasazekileyo zisebenze ngcono kwimarike yezemali.
Ukusukela i-Bitcoin Cash ibhijelwe ngaphandle kwe-Bitcoin, i-asethi ye-crypto ibanjiwe kwiwebhu yeefolokhwe ezininzi ezivela ngenxa yengxabano enye okanye enye. Emva kokwahlulwa kwe-BSV, i-BCH ivulele enye ifolokhwe.
Abantu abanzima kakhulu be-(BCH) Imali yeBitcoin blockchain ngoku sele yenziwe. Ingxelo yoku ithi, “okwangoku kukho ophumeleleyo ocacileyo kwimpikiswano phakathi kwamaqela ophuhliso e I-Bitcoin Cash (BTC ABC) kunye neBitcoin Cash Node (BCHN).
Ukuphakama kwinqanaba le-hash kuwo omabini amaqela i-BCH, i-ABC kunye ne-BCHN ibonisa ukuba i-BCHN iphumelele kuzo zonke iibhloksi ezingama-73 ezichithwe ngokusebenzisa iphuli yemigodi yesoftware ye-BCHN.
Ukuphumelela kweBitcoin Cash Node kulindelwe kwanangaphambi kwefomula yeBitcoin Cash, i-88% yabasebenzi mgodini wathi Inkxaso kuRoger Ver, umphuhlisi oyintloko we-BCHN. Ngaphezu koko, utshintshiselwano olukhulu njengeCoinbase lukwabhengeze inkxaso yabo kwi-BCHN.
Impikiswano emva kweForki enzima
Impikiswano ikhokelele kwimfoloko egxile kwi "Coinbase Rule", ethi i-8% ye-Mined BCH mayithunyelwe kwi-Bitcoin ABC ukuxhasa ngezimali uphuhliso lomgaqo. URoger Ver ngokubhekisele kumgaqo weCoinbase obonakalayo njengephupha lomcwangcisi ophambili wesoviet uzaliseka kwaye ngenxa yoko wayephikisana nalo.
Ngaphezulu kwe-7.6 yezigidigidi zeedola zemali ekuthiwa zibiwe ukusukela ngo-2011 ngamagama amabhakethi amabini anokuqikelelwa; IiHacks kunye neeScams. Ngokwengxelo, i-2.8 yezigidigidi zeedola ibiwe ngokusebenzisa iiHacks zizonke malunga nokuhlaselwa okungama-113, eyona inkulu yeyokuqhekeza iCoincheck e2018 malunga nezigidi ezingama-535 ezigidi zeNEM Coin.
I-United States, i-United Kingdom, i-China, i-Japan kunye ne-South Korea ziye zafumana elona nani liphezulu lokuphula umthetho kwezokhuseleko, apho i-United States ikhokelela kuhlaselo ekujoliswe kulo malunga ne-13. ICrystal blockchain ichonge izikimu ezingama-23 ezibalaseleyo zobuqhetseba ezine- $ 4.8 yezigidigidi ebiwe ngobuqhetseba.
I-7.6 yezigidigidi zeerandi luqikelelo olupheleleyo lwee-asethi ze-crypto ezibiweyo kule minyaka ili-10 idlulileyo, apho i-China ikhokela ipakethi ngokubhekisele koogxa bayo abakhulu. Ngokudabukisayo, inani lamahacks aphucukileyo kunye nobuqhetseba buhlala bunyuka njengoko iminyaka ihamba.
Ukutshixeka kweCoronavirus kuqhuba ukwamkelwa kwee-ATM zeBitcoin up ngama-85%
Ehlabathini lonke, ukufakelwa koomatshini abazenzekelayo ngomatshini ozenzekelayo kulo nyaka ngenxa yesidingo esenziwe yi-coronavirus semicimbi yokunxibelelana. Inani lee-ATM ze-BTC zonyuswe nge-85% zizisa itotali kwi-11798, njengoko kuchaziwe Inkcazo yee-ATM Radar.
Kwenye ingxelo ngu Imagazini yoRhwebo kwiHlabathi liphela, ityhila ukwandiswa kokwamkelwa kweBitcoin njengoko uloyiko losulelo lwe-coronavirus lukhawulezisa ukukhula kweemarike. Ii-ATM ze-Bitcoin zivumela ukuthengiselana kusetyenziswa amakhadi etyala okanye okuthenga, kuzo zombini izixhobo zeeselfowuni okanye zekhompyuter.
Zingaphezulu kwe-800 ze-ATM ze-BTC ezifakiwe ngo-Okthobha e-US kuphela kwaye amazwe amaninzi anokulandela. Oku kuqhuba kukonyusa ukuthatha inxaxheba kunye nokusetyenziswa kwii-cryptocurrensets kwihlabathi liphela njengoko iBitcoin imatsha yomelele ngakumbi kunangaphambili. Ngeenkampani ezinkulu ezifana nePayPal ngoku zibolekisa ngenkxaso yazo, ii-cryptocurrensets zimiselwe kakuhle ukuba zingene kwigagasi elilandelayo lokwamkelwa kwabantu abaninzi.
I-DeFi iingxaki: Inani elipheleleyo lomsebenzisi ukuya kuma-55% kwijust iiveki ezintandathu
Awunakho ukugcina umhlaba we Imali eyabelwe imali ngaphandle kwebala. UDeFi ukwazile ukurekhoda ukukhula okungama-55% kwinani lilonke. Abasebenzisi kwezi veki zintandathu zidlulileyo ngaphandle kwelahleko enkulu ethe yafunyanwa kwinyanga ephelileyo. Kakhulu ngenxa ye- ukungakhathali malunga neDeFi, abagxeki abaninzi bakhawuleza babhala "i-DeFi bubble". Ukulinganisa i-metric nangona kunjalo kungqina ukuba umzi-mveliso uzinzile ukukhula kwecandelo ngokubanzi.
Iimarike ze-Crypto data aggregator Uhlalutyo lwe-Dune iqaphele ukuba inani elipheleleyo labasebenzisi beDeFi elikhethekileyo lonyuke phantse kalishumi ngaphezulu xa kuthelekiswa nezibalo zonyaka ophelileyo. Ukunika umbono, abasebenzisi abatsha abangama-85,000 bafunyanwa bongeziwe kwinani esele likho labasebenzisi beDeFi kwiiveki ezimbini zokuqala zikaNovemba 2020.
Ikhompawundi kunye ne-Dydx ziphakathi kwezona zinamandla ze-DeFi kumaxesha akutshanje. Ukungaguquguquki kuye kwanda ngokukhawuleza njengenani lokubhangqa wavuka ngama-34%. Ukungatshintshi, ijika, ukuSushiswap kunye nokwenza i-Ox ngaphezulu kwe-91% yoTshintshiselwano oluMiselweyo.
I-PayPal ifikelela kuma-85% eBinance.US Umthamo wokuqala Inyanga
Abasebenzisi baseMelika bavala ukurekhoda ivolumu eyi- $ 25 yezigidi kurhwebo kwiBinance.US yokutshintshiselana, kwinyanga nje enye yokuqaliswa kwenkonzo ye-PayPal ye-crypto. Ngomhla we-13 kuNovemba, iPayPal yaphakamisa ixesha lokulinda kubathengi bayo baseMelika.
PayPal yaqala Iminikelo ye-crypto ngentsebenziswano nePaxos ngo-Okthobha. Umthamo wezorhwebo wemihla ngemihla I-Paxos inkonzo yorhwebo, ItBit yokutshintshiselana yaphakama malunga namaxesha amane ngoNovemba. Ukulandela ukumiliselwa kwe-PayPal's crypto, i-30 yezigidi zeedola kwimisebenzi yosuku yarekhodwa izisa iPayPal kumaphepha angaphambili eendaba ezinkulu kunye neqonga leendaba.
Nangona kunjalo, i-PayPal isadinga ukugubungela umhlaba obalulekileyo, ngaphambi kokuba ikwazi ukuthatha kamnandi ukhuphiswano notshintshiselwano olufana nolwakhona Kraken kwaye Proinbase Pro apho umthamo wokuthengisa wemihla ngemihla ungaphezulu kwe- $ 500 yezigidi. I-PayPal inokuvula isigaba esilandelayo se-cryptocurrency eyamkelweyo yokwamkela ngokusebenzisa iphuli yayo ye-364 yezigidi zabasebenzisi beentengiso njengoko iinkonzo zokusebenza ziqala e-US.
Okwangoku, i-PayPal ixhasa ii-cryptocurrensets ezine kuphela: iLitecoin, iBitcoin, iBitcoin Cash, kunye ne-Ethereum. Kukho izicwangciso zokwanda kwiYurophu iphela kunokuya kwihlabathi liphela ngokwenza inkonzo yayo ifumaneke kubo bonke abasebenzisi bePayPal.
Into ekufuneka ikhankanyiwe kukuba i-PayPal ayivumeli abasebenzisi ukuba bakhuphe i-cryptocurrency yabo kwiqonga labo, boyise ngempumelelo yonke injongo yokuthenga ii-cryptocurrensets nge-PayPal. Ngaphaya koko, i-PayPal inerekhodi yomkhondo weakhawunti yokuqandisa ngaphandle kwesilumkiso, ishiya abanye abathengi bengenandlela yokuphikisana nesigqibo sePayPal kwaye inokubashiya abanye abathengi ngelahleko ezinkulu.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili kwiposti yethu enesihloko "Iindlela ezi-4 eziGqwesileyo ekufuneka uzilandele ekukhuseleni i-Cryptocurrency Holdings yakho”, Ukuba awunazo izitshixo zeekhompyuter zakho (ii) i-cryptocurrency, usenokucinga ukuba i-cryptocurrency ayisiyoyakho. Ke ngoko kububulumko ukuthenga ii-cryptocurrensets ngotshintshiselwano olunje Binance ekuvumela ukuba urhoxe i-crypto yakho kwidilesi yakho yesipaji.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Novemba 23, 2020
Iindlela ezi-4 eziGqwesileyo ekufuneka uzilandele ekukhuseleni i-Cryptocurrency Holdings yakho
Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu ekucetyiswa i-newbie kwindawo yedijithali yemali yindlela yokuphatha ngokukhuselekileyo kunye nokugcina iiasethi ze-imali yedatha. Esi sesona sifundo sibalulekileyo kwi Imfundo ye-crypto ngakumbi xa uqala. Kwesi sithuba, uyibhanki yakho kwaye ngenxa yoko uxanduva lwakho kuphela kuyo nayiphi na ilahleko enokubakho.
Ukusuka ekuthengeni imali yedijithali usebenzisa i crypto exchange ukufumana i isikhwama esikhuselekileyo sokugcina kunye nokuthengiselana okukhuselekileyo kwemali yedijithali mihla le, okuninzi kungahamba gwenxa ngenxa yokungazi okanye ukungabinalo ulwazi olwaneleyo lokugcina imali. Ke masithethe kancinci malunga netekhnoloji ye-blockchain kunye nendlela ii-cryptocurrensets ezibopha ngayo.
I-Cryptocurrency kunye neBlockchain: Masazi iziseko!
2. Ukhuseleko lweWallet ye-Crypto
3. Ukukhusela ngokukhuselekileyo iWallet yakho
4. Ayizizo ii-Keys Zakho, Hayi iiNgqekembe zakho!
I-Bitcoin yayiyimali yokuqala yedijithali yasekwa ngu Umntu ongaziwayo okanye iqela labantu phantsi kwegama elibi uSatoshi Nakamoto emva kwengxaki yemali ka-2008. Ukusukela oko baqala, i-Bitcoin kunye nezinye i-cryptocurrensets ziye zaqhubeka nokumatsha zisiya kulwamkelo oluqhelekileyo.
Imali yedijithali ngokusisiseko yimali ebonakalayo okanye yedijithali ekhuselweyo yi ileja yokubhala ewenza ukuba kube nzima ukuvelisa izinto zomgunyathi kwaye uzenze ukuba zingabinamali yokuchitha. Uninzi lwee-cryptocurrensets ziphantsi kolwazelelo kwaye zakhiwe ngaphezulu Iteknoloji ye-blockchain.
Eyona nto ixhaphakileyo phakathi kweemali ezininzi zokukhusela imali kukuba azikhutshwa okanye zilawulwe naliphi na iqela eliphambili. Kananjalo, zichasene nokunyanzelwa okanye ukuphazanyiswa ngurhulumente okanye ubuqhetseba. Ngokuyilwa, zisasazwa ngokubanzi.
Iidijithali zemali zinokuhanjiswa ngokuthe ngqo phakathi kwamaqela ngaphandle komthungo ngaphandle kwemfuneko yomntu wesithathu; akukho bhanki, akukho nkqubo yokungena. Ngokwesiqhelo, kuhlawulwa umrhumo wokumbiwa ngokuthumela imali ye-imali yedatha, ehlawulwa ngumthumeli. Uninzi lweebhloko ze-blockchains zixhasa iifizi ezingaphantsi kwesenti okanye iisenti ezimbalwa ezikhuphisana kakuhle nemirhumo emikhulu ehlawulwa ziibhanki.
I-Bitcoin isebenza kwitekhnoloji ethembekileyo nethembekileyo ye-ledger (blockchain) esasaza ikopi yayo yonke imicimbi yayo kuwo onke amaqela abandakanyekayo. Yonke intengiselwano iyabonakala kwaye iqinisekisiwe ngumntu wonke okwinethiwekhi.
Ukuqinisekisa ukuthengiselana ngetekhnoloji ye-blockchain ithatha i-algorithm yemvumelwano. Ngalo naluphi na utshintsho olwenziweyo kwinethiwekhi, kufuneka kufikelelwe kwisivumelwano ngabo bonke oontanga benethiwekhi (umzekelo. Bonke abasebenzi-mgodini kwimeko yeBitcoin). Ukuba utshintsho olucetywayo lusilele ukufumana imvumelwano efunekayo, olo tshintsho luya kulahlwa yinethiwekhi ngokuzenzekelayo.
Ukuthenga imali yedijithali okokuqala kuya kuthetha nokufumana Isipaji semali ethembekileyo ukugcina ngokukhuselekileyo iiasethi zakho. Ukwazi izinto ezifanelekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha isipaji sakho se-crypto kubaluleke kakhulu kumntu othanda i-crypto. Uninzi luye lwehlelwa ziintlekele kwaye ngamanye amaxesha lwaphulukana nokholo kwii-cryptocurrensets zizonke njengesiphumo sokungazi ngokukhetha iindlela ezingakhuselekanga kwezingxobo ze-crypto.
Abasebenzisi beDijithali yemali banokukhetha phakathi kwe-Intanethi, ngaphandle kweintanethi okanye izipaji zekhompyutha. Kuxhomekeka kukhetho olwenzileyo lokuhlawula isipaji esinezona zinto zikhuselekileyo zilungile. Nangona ii-wallets ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kunye ne-intanethi zingqineke zikhuselekile, nangona kunjalo izipaji zekhompyutha aziwa ngokubonelela ngokhuseleko oluphezulu kwiiasethi zakho zedijithali.
Iipaji ezikwi-Intanethi ngokubanzi zisimahla, zinokusebenziseka lula kwaye ziyafumaneka kwaye ngenxa yoko, zezona ndawo zisetyenziswa rhoqo kwimali ye-crypto. Kwangelo xesha, ngabona basesichengeni phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zewallet crypto. Ecaleni kwe isixhobo sekhompyutha, Isipaji esingaxhunyiwe kwi-intanethi sinikezela ngokhuseleko olungcono kwii-asethi zakho ze-crypto. Ngesipaji ngaphandle kweintanethi, umi emngciphekweni wokuphulukana nemali yakho kuphela ukuba ulahlekelwe sisiliphu sephepha.
Xa ujonga isipaji sewebhu, qiniseka ukuba ukhetha kuluhlu lweewallets ezikhuselekileyo nge-HTTP (HTTPS). Unokunciphisa ukhetho lwakho ngokusekwe ekubeni ingaba i-wallet yi-2FA / MFA yenziwe kwaye inenkxaso yegama eligqithisiweyo. Isipaji sewebhu esingazixhasi ezi zinto sinokubangela ubungozi kwiimali zabasebenzisi. Blockchain.com ngumzekelo olungileyo wesipaji esikwi-intanethi, ekulula ukusisebenzisa kwaye silungele ukugcinwa okukhuselekileyo. Iipaji ezikwi-Intanethi zihlala zibizwa ngokuba ilifu izipaji.
Ukuba ukhuseleko lolona luqwalaselo luphezulu kunobuhlobo bomsebenzisi, indleko zenkonzo njl., Isipaji sehardware sihlala sicetyiswa. Ledger Nano X Iyaziwa ngokubanzi phakathi kwezipaji zehardware phaya kwaye nakwikhredithi yayo kubhalwe ngokwembali phantse ukuhlaselwa okunguziro ngaphambili.
Uninzi lwezikhwama zeBitcoin yiMultisig; Ithetha ukuba bafuna ngaphezulu kwesitshixo esinye sokugunyazisa intengiselwano (kuthatha amaqela amaninzi ukusayina intengiselwano ngaphambi kokuba kwenziwe). Le yenye indlela efanelekileyo yokukhusela i-Bitcoin kubusela obunokubakho. Ezinye izipaji zemali ezidumileyo zizipaji zeTrust, iCoinomi, iBlockchain.com isipaji sefowuni, njl.
Ukuba usebenzisa isipaji se-cryptocurrency okokuqala ngqa, ukubambelela kwisipaji esikhuselekileyo kodwa esinokusebenziseka kufanele ukuba kube yinjongo yakho. Amaxesha amaninzi, ilahleko zenzeka ngenxa yolwazi olungonelanga malunga nendlela yokutshintsha iiasethi ze-imali yedatha. Ezi ntlobo zelahleko ziyandiswa ukuba isipaji sinzima; okwenza kube nzima ukuhamba.
Ewe kunjalo, kukho iimeko apho ii-asethi ze-crypto zilahlekile ngokuzithumela kumamkeli ongalunganga. Umzekelo, i-Bitcoin ithunyelwa kwidilesi ye-ETH; ngakumbi xa usebenzisa iiwallet zemali ezininzi. Amatyala afana nala aqhelekile kodwa ahlelwe njengempazamo ye-rookie. Ke ngoko, iiwallet ezingafakwanga idilesi engasebenziyo kufuneka zithintelwe ngokupheleleyo.
3. Ukuxhasa ngokukhuselekileyo iWallet yakho
Uya kuba nolawulo oluncinci okanye ungabikho kwaphela kwisipaji sakho ukuba asixhaswanga ngokufanelekileyo. Isipaji esiqhelekileyo siqukethe isitshixo sangasese kunye noluntu. Njengoko igama lisitsho, izitshixo zikawonke-wonke azifihli; zinokubonwa nangubani na ngaphandle kweziphumo ezinokubakho. Izitshixo zoluntu ziphethe ulwazi malunga nayo yonke imbali yentengiselwano. Nabani na ofumana izitshixo zakho zikawonke-wonke unokujonga yonke imbali yentengiselwano kodwa akakwazi ukwenza utshintsho kwimali eseleyo kwingxowa-mali yakho.
Izitshixo zabucala kwelinye icala zizitshixo eziyimfihlo kwaye zibaluleke kakhulu; kufuneka zigcinwe ziyimfihlo kumntu wesithathu. Amaqhosha abucala zizitshixo eziphambili kwimali yakho, nabani na onezitshixo zakho zabucala unokuchitha imali yakho ngaphandle kwemvume. Umtya wabalinganiswa kuko konke okudingayo ukuze ubuyise imali yakho kwimeko yokuphulukana nokufikelela kwifowuni yakho okanye iPC egcine isipaji sakho.
Ke ngoko, kufuneka ikhutshelwe ngokuchanekileyo kwaye igcinwe kwindawo ethile yabucala ukukhusela ubuninzi. Yindlela elungileyo ukugcina ezi zitshixo kwiindawo ezininzi ezingaxhunyiwe kwi-intanethi. Ungaze ugcine izitshixo zakho zabucala kwi-Intanethi ngakumbi kwi-imeyile okanye kwindawo yogcino lwedatha enokuthi isetyenziswe.
Xa ukhetha isipaji se-cryptocurrency, qiniseka ukuba isipaji sikunika ukhetho lokuthumela ngaphandle amaqhosha akho abucala kwifayile ebhaliweyo. Gwema ukuthatha izikrini zesikrini sakho sabucala okanye ibinzana lokudlula, njengoko ezinye iiapps zinokufikelela kwiscreen sakho kunye neefayile.
Ikwaqwalaselwa njengeyona ndlela yokusebenza ukuzama ukubuyisela imali yakho usebenzisa ezo zitshixo zabucala okanye amagama okugqitha ukuqinisekisa ukuba ukhuphelo luyasebenza. Nangona kunjalo, bayasebenza ngaphandle kokungaphumeleli ukuba bakope ngokuchanekileyo.
Amathuba kukuba mhlawumbi uvile ngale ngxelo amaxesha ambalwa! Isiteyitimenti saba likhaya le-crypto phakathi kokuthandwa okwandayo phakathi konaniselwano olumbindi olugcina izitshixo zakho kodwa zingaze zikunike ukufikelela kuzo.
Ukuba awunazo izitshixo zakho, unolawulo olulinganiselweyo kwimali yakho-ilula ngoluhlobo! Nangona ukutshintshiselana okuphakathi kulula ukuyisebenzisa kwaye Eyona nto ilungele ukuthengisa, zihlala zizona njongo ziphambili ze-crypto hacks, kuba abasebenzisi abanjalo banokuphulukana ngokulula nemali yabo kwimeko yohlaselo olukhulu.
Utshintshiselwano oluphakathi lwe-imali yedatha lunokukuthintela ukuba ufikelele kwingxowa-mali yakho nangaliphi na ixesha, wenze ngokwemiyalelo karhulumente yokuthimba iiasethi zakho okanye ujike nje ulishishini lobuqhetseba kwaye ube imali yakho.
Ukugcina oku engqondweni, ukutshintshiselana nge-idijithali yemali ayisiyondawo ilungileyo yokugcina iiasethi zakho ze-crypto ngaphandle kokurhweba okwethutyana. Ukuba kubaluleke kakhulu ukuhambisa imali yakho ye-crypto kutshintshiselwano, kungcono ukuba unamathele kwi abanesidima.
Isipaji esisemthethweni esikunika ukufikelela kumaqhosha akho abucala kufuneka ibe lukhetho olukhethiweyo lokugcina iiasethi ze-cryptocurrency. Ukhuseleko lwe-Crypto sesinye sezihloko ekuxoxwa ngazo kwishishini, kodwa uninzi lwabantu alunikeli ngqalelo yaneleyo kulo.
uninzi ubusela be crypto, ii-hacks, kunye ne-scams zenzeka ngenxa yeempazamo, ukungakhathali ngabasebenzisi okuqhubeka kugxininisa ukubaluleka kwe- Imfundo ye-crypto, ngakumbi njengoko ukhuseleko lwe-crypto sesona sifundo sixabisekileyo.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Novemba 18, 2020
Iindaba zeCrypto kunye neBlockchain-Iveki kaNovemba 11th 2020
Amagqabantshintshi e-Crypto: ILebhanon iphehlelela iiasethi zedijithali, iiDeFi hacks ziyanda, iNew Jersey yazisa ngeCrypto License, Iifayile zeCred zokungabinamali, iKoCoin ifumene i-84% ye-crypto ebiweyo: iinkcukacha ezinomdla ngakumbi apha ngezantsi!
Amagqabantshintshi e-crypto yale veki ngokuthi UCrypto Gator jolisa kula mabali aphezulu alandelayo nakwabanye abaninzi abavela kwihlabathi liphela.
Izihloko eziphambili ze-Crypto
Amabali aphezulu e-Crypto
ILebhanon isungule imali yedijithali ejongene nengxwabangxwaba yezoqoqosho nezemali
Ingxelo: Ulwaphulo-mthetho lwe-Crypto lunqabile kwi-2020, kodwa iihacks zeDeFi ziyanda
INkqubo yeNtshona Afrika iya kugcina idatha yeMozulu kwiTelos Blockchain
INew Jersey isondela kufutshane nelayisensi ye-Crypto ngokungeniswa kweBhili yeeNgwevu
Umbolekisi wemali yedijithali Iifayile zeCred zokungabinamali
UKuCoin ufumene i-84% ye-crypto ebiweyo emva kokuqhekeka kwe- $ 280M, utshilo umsunguli
Yonke iBhanki eNkulu iyakuboniswa kwiBitcoin, utshilo uBill Miller oyiMphathi weNgxowa-mali
Ukulandela ukukhwabanisa okukhulu kuka-Kucoin, u-CEO u-Johnny Lyu wabhengeza ngo-Novemba ngo-11 ukuba inkampani ukuza kuthi ga ngoku ifumene ukuya kuthi ga kwi-84% yeeasethi zizonke ezibiweyo kuhlaselo lwamva nje oludumileyo.
Umbolekisi omkhulu we-crypto u-Cred uxelwe ukuba ufikile ngenxa yokulahleka emva kweengxelo zokuba ibhalansi yakhe "ichaphazele kakubi" "ngumenzi wobubi"
I-DeFi boom yangoku itsale amaqanda amaninzi amabi akhokelela ekunyukeni kwe-DeFi hacks ngaphandle kokuhla okukhulu kwe-crypto scams kwi-2020.
Njengoko imali yedijithali iqhubeka nokufumana ukwamkelwa okukhulu, amazwe amaninzi ngoku ajonge ukumilisela uguqulelo lwedijithali lwemali yabo yemveli ukuthintela ubunyani bezoqoqosho. Ngokukhanya, iLebhanon ngoku ithatha indlela efanayo. Njengoko kubhengeziwe yibhanki ephambili yelizwe, iLebhanon ilungiselela ukumiliselwa kwemali yayo yedijithali kwi-2021.
"Kufuneka silungiselele iprojekthi yemali yedijithali yaseLebhanon," utshilo irhuluneli yebhanki esembindini uRiad Salameh. USalameh khankanyiweyo ukuba baqikelele ukuba kukho i-10 yezigidigidi zeedola ezigcinwe ngaphakathi kwamakhaya ngokwe-Arhente kaZwelonke yeendaba. Imali yedijithali ibekelwe ukubuyisela ukuzithemba kwakhona kwinkqubo yebhanki.
Ibhanki esembindini iqaphele ukuba iprojekhthi yemali yedijithali emiselwe ukwaziswa ngo-2021 iyakuba luncedo ekuphunyezweni kwenkqubo yemali engenamali ukuze kuphuculwe ukuhamba kwemali kweli nakwamanye amazwe.
Ngokutsho kwiBhanki yeHlabathi, uxolelo lwelizwe lubeka phantse i-14% ye-GDP yayo. Oku kuyakuphembelela ngokungathandabuzekiyo inkqubo yokuthunyelwa kwemali ngaphandle kwempikiswano evela kwilizwe ngokubanzi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-2020 ibiyinto emangazayo kwezemali ezisemthethweni (i-DeFi), ngokunyuka komdla omkhulu. Ukwamkelwa okuhamba kunye necandelo lezemveliso bekuhambelana ngokufanayo nokunyuka kweeprothokholi ezishiye uninzi Defi iiprojekthi zokopha zide zife.
Nangona, idatha evela I-crypto analytics firm CipherTrace ibonisa ukuba inani elipheleleyo lelahleko ze-crypto ngenxa yobusela be-crypto, ubuqhetseba kunye ne-hacks behla ku $ 4.4 billion Kwi-2019 ukuya kwi-1.8 yezigidigidi zeedola ngaphezulu kweenyanga ezili-10 zokuqala zika-2020, isayina ukwehla okukhulu kulwaphulo mthetho lwe-crypto. Umphathi we-CipherTrace u-Dave Jevans uqhubeke wagxininisa ukuba ukwehla okukhulu kulwaphulo-mthetho lwe-crypto bubungqina bokuphumelela kwamanyathelo okhuseleko asasazwe kulo lonke eli shishini.
Ngaphandle kokuhla kolwaphulo-mthetho lwe-crypto kwi-2020, iCypherTrace iphinde yaxela ukuba bekukho i-arsenal enkulu ekujoliswe kuyo kwiiprojekthi ze-DeFi ezikhokelele ekunyukeni kwe-DeFi hacks ngoku eyi-20% yazo zonke ilahleko ze-crypto ngenxa yobusela. "Ukunyuka kwe-DeFi yeyona nto yatsala abagxeki bolwaphulo-mthetho, kukhokelela kwelona candelo lide kweli candelo," ingxelo iqhubeka icacisa.
Uhambo oluya kwindawo ephambili yokwamkelwa komntwana luyaqhubeka njengoko iZizwe ezininzi zijonga ukubanamandla e-blockchain. Ngeli xesha, iqonga le-blockchain elidumileyo Iifowuni ifikelele kubambiswano nenkampani yetekhnoloji yemozulu evulekileyo Iqela leMozulu laseTelokanda. Olu bambiswano lujolise ekumiselweni kwenkqubo edityanisiweyo kunye nokwabelana ngeengxelo zemozulu kwingingqi yeNtshona ye-Afrika kwi-blockchain yoluntu.
Ngokwengcaciso, inkampani yaseNtshona Afrika izakusebenzisa i-Telos blockchain ukunceda abafundi bamaziko emfundo ephakamileyo kunye noluntu lwasezifama ukurekhoda nokwabelana ngeengxelo zemozulu ngenjongo yokuphucula uphando lwemozulu, uqikelelo lwemozulu yalapha, kunye nokulandelwa kwenkanyamba.
Ngexesha lokudityaniswa kolwazi, iTelokanda sele ifikelele kubambiswano ne University of Uyo kwaye IYunivesithi yaseRivers State eNigeria, kananjalo KwiSixeko soPhulo apho abafundi baya kuba nakho ukusungula iibhaluni zokulandela umkhondo zemozulu zokulandela idatha.
Ukuqala, iTelokanda iceba ukuba iyunivesithi nganye isungule ibhaluni enye ngeveki, inyusa ukwaziswa mihla le ngo-2021, utshilo isithethi.
INew Jersey isondela kufutshane nelayisensi ye-Crypto ngokungeniswa kweSenate Bill
Ummiselo we-Crypto ibe sisihloko esishushu kolu shishino kulo nyaka kwaye njengoko bekulindelwe, uninzi lweefisithi ze-crypto kunokwenzeka ukuba zithambekele kwimimandla ekhuthaza imigaqo efanelekileyo ye-crypto. Nangona isizathu semigaqo sinokuhluka ngolawulo kwaye ngenxa yoko uninzi lwamazwe sele eyila imithetho yokulawula imisebenzi ye-crypto. INew Jersey yeyokugqibela kolu luhlu.
I-crypto yeNew Jersey Mthetho "I-asethi yeDijithali kunye ne-blockchain Technology Act" yayixhaswe ngu-Sen. Nellie Pou ngoLwesine, umhla we-3 ku-Okthobha. I-senate bill 3132 ibekwe ekulawuleni ababoneleli beenkonzo ze-cryptocurrency phantsi kweliso le-NJ yeSebe lezeBhanki kunye ne-Inshurensi.
Lo mthetho uyilwayo omtsha uthetha ukuba amashishini kunye nabantu baya kuthintelwa ekuqhubeni nayiphi na imisebenzi yeshishini le-crypto ngaphandle kokuba bafumene ilayisensi ngokufanelekileyo eNew Jersey okanye banelayisensi yokubuyisa kwelinye ilizwe.
Ngenxa yoko, nawaphina amashishini angenawo amaphepha-mvume asebenza ngokushishina nge-crypto eNew Jersey aya kuhlawuliswa imali engama- $ 500 ngosuku de kufakwe isicelo sephepha-mvume.
Umbolekisi wemali yedijithali Iifayile zeCred kwi-bankruptcy
Ii-Crypto hacks kunye nobuqhetseba zibe zizine kolu shishino kwaye zanegalelo ikakhulu kubukho bezinye iifemu ze-crypto eziqale ngenqaku elizukileyo. Kuphuhliso lwakutsha nje, uCred umnikezeli wenkonzo yemali yedijithali onike inzala kwiidiphozithi zemali yedijithali uxelwe ukuba ufayilisile njengoko inkampani ibhengeza iphepha elibi.
Nge-28 ka-Okthobha, uCred utyhile ukuba ibalance sheet yakhe "ichaphazele kakubi" "ngumenzi wobubi." Ukulandela olu phuculo, uCred uxele ukuba unqumle ukurhoxiswa kwabathengi kwiCredEarn, inkonzo yenkampani enomdla.
Kwisahluko se-11 Kufakwe uxwebhu lokungabinamali nguCred nge-7 kaNovemba, inkampani ixelwe ukuba ine- $ 50- $ 100 yezigidi zeasethi kodwa i-whopping $ 100- $ 500 yezigidi kumatyala. Oku kubonisa ukuba uCred uxinzelelo lwezezimali okwexeshana ngaphambi kokugcwalisa njengongenamali.
Ngenxa yoko, imali yedijithali urhwebo iqonga Uphold libuphelisile ubudlelwane balo neCred njengoko kubhengeziwe kwi ngeposi blogU-Uphold uqhubeke wathi bamangalela i-Cred LLC kunye nabo basebenzisana nabo, kunye nabaseki beCred ngezityholo zobuqhetseba, ukophula ikhontrakthi kunye nomonakalo owaziwayo.
Ukuqhubela phambili kweli nqanaba, iCred utyhola iqela le-MACCO Restructuring Group ukuba likhokele iinkonzo zalo zokucebisa ngezimali ekuvavanyeni ukudibana okukhoyo kunye namathuba okufumana.
UKuCoin ufumene i-84% ye-crypto ebiweyo emva kokuqhekeka kwe- $ 280M, ithi ifunyenwe ngokudibeneyoer
Izikhundla zokuqhekeka kweKuCoin phakathi kobusela obukhulu be-crypto ngo-2020. Ngaphandle kwempumelelo yonyanzeliso lokhuseleko, ukutshintshiselana nge-crypto kuseseyona nto kujoliswe kuyo kubaduni kunye nabadlali abangenabubi. Nge-25 kaSeptemba, utshintshiselwano olwaludumile lwe-crypto lwalukhona Kuxelwe ukuba kungenwe kuyo malunga ne- $ 280 yezigidi eqikelelweyo, ekhokelela ekubeni ii-asethi ezininzi ze-ERC20 kunye neBitcoin zisuswe kude notshintshiselwano.
Kuphuhliso lwamva nje, iKuCoin ibhengeze ukuba inayo ku hlaziywa uninzi lweemali ezilahlekileyo kwi-280 yezigidi zeedola isiganeko sokugenca ngoSeptemba. U-CEO we-Kucoin, u-Johnny Lyu wabhengeza ngo-Novemba ngo-11 ukuba inkampani ukuza kuthi ga ngoku ifumene ukuya kuthi ga kwi-84% yeeasethi zizonke ezibiweyo kwi-hack enkulu.
Ngokuka-Lyu, inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ibandakanyeka "ekulandeleleni ikhonkco, ukuphucula ikhontrakthi, kunye nokubuyiselwa kwezomthetho." Uye waphinda wathi ukutshintsha kuya kuthi kwiintsuku ezizayo kupapashe iinkcukacha ezithe vetshe ngokubuyiselwa kwemali kwakuba kuqinisekisiwe ngazo zonke iinkcukacha zokuqhekeza.
U-Kucoin ekugqibeleni uqalisa kwakhona iinkonzo ezizeleyo ngokuthe ngcembe, ukuza kuthi ga ngoku, utshintshiselwano luye lwaqala kwakhona iinkonzo ezizeleyo zokurhweba nge-176 iyonke Ngama-230 iiasethi ezinokuthengiswa ukuya kumhla. I-CEO iqaphele ukuba iinkonzo ezipheleleyo zeasethi eseleyo ziya kuvulwa ngaphambi kwe-22 kaNovemba.
Yonke iBhanki eNkulu iyakuboniswa kwiBitcoin, itsho iBill Mill yoMlawuli weNgxowa-mali owaziwayoer
Njengoko i-Bitcoin iqhubeka nokuhamba ukuya ekwamkelweni kweziko, kukho intetho ethandwayo yokuba kungekudala iibhanki ziya kuthi zibonelele ngeenkonzo zezezimali ze-crypto ukuba zithathelwe ingqalelo njengebhanki epheleleyo. Umphathi weNgxowa-mali owaziwayo uBill Miller usandula ukuhambelana nezimvo zakhe kutshanje.
Ngokutsho kumtyali mali odumileyo uBill Miller, iibhanki ezinkulu, iinkampani ezinexabiso eliphezulu, izindlu zotyalo mali ziya kushiyeka zingenandlela ngaphandle kokuvezwa kakhulu kwiBitcoin, kwaye ngenxa yoko zamkele iasethi yedijithali.
Amabango kaMiller kumanani akhulayo amaziko eenkampani ngoku afumana ukubhencwa okuthe kratya kwiBitcoin, kwaye ngenxa yoko wenza uqikelelo lokuba amanye amaqumrhu azakulandela. Iifayile ezikwiprofayili ephezulu ezamkele iBitcoin ngo-2020 zibandakanya utyalo-mali lweMicrostrategy's $ 425 yezigidi, iPaypal isungula inkonzo ye-cryptocurrency, kunye notyalo mali lweBitcoin.
Ukuvezwa kwamaziko kubalulekile kwi-Bitcoin ukuze ifumane ukwamkelwa okuqhelekileyo, kwaye ngokukaMiller, amanyathelo asandula ukwenziwa ziifemu esele zamkele iBitcoin anokukhuthaza ezinye iinkampani ezinkulu ukuba zisebenze.
Ukunika ingxelo ngomtsalane we Utyalomali lweBitro, UMiller uphindaphinde ubonelelo olulinganiselweyo lweBitcoin njengesona sizathu siphambili sokuba kutheni ibango liza kuhlala likwicala eliphezulu. I-Bitcoin yinkqubo yomgaqo-nkqubo we-ledger, kunye nonikezelo olulinganiselweyo kunye nemfuno eyandayo. Unikezelo lweBitcoin lukhula ngokuzinzileyo malunga neepesenti ezi-2.5 ngonyaka kwaye lubhalwe kwi-21 yezigidi zezigidi zeBitcoin ngonyaka wama-2140.
By I-Crypto Gator ezaposwa ngomhla Novemba 13, 2020
Abathengisi beBitcoin bahleli ezandleni zabo emva kokubona umnqamlezo wokufa kwitshathi yemihla ngemihla kodwa ngaba oku kunokuba ngumqondiso wokuthenga kubatyali mali?
By ezaposwa ngomhla iiyure 3 eyadlulayo
Imiba ethwaxa umhlaba wezezimali- nokuba zezemali esembindini, i-inshurensi, ukubolekisa okanye ezinye iiasethi- zonke zibuyela kwimpazamo yabantu.
Iposi iiBhanki azizukubakho kwiminyaka elishumi ngaphandle kokuba batshintshe imodeli yeshishini labo lavela kuqala kwiCryptoSlate.
I-USD / MXN inokuhamba isezantsi kwiveki ezayo ukuba iFed ibambelele kwiskripthi se-dovish kwaye iphinda ithi ngoku ayiloxesha lokuqala ukuthetha malunga nokurhoxa kwenkuthazo ngaphandle kokunyuka kwamaxabiso.
By ezaposwa ngomhla iiyure 4 eyadlulayo
Ikhampasi entsha yeNavidia yeVoyager isebenza njengendawo yokuvavanya ukuba izakubonakala njani xa iMetaverse ihlangana nomhlaba ophathekayo.
Iinkunzi zeenkomo kunye neebhere zinovalo ngokulinganayo malunga nesiphumo se-25 kaJuni yeedola eziyi-1.5 zeebhiliyoni zokuphelelwa lixesha.
By ezaposwa ngomhla iiyure 6 eyadlulayo
Last week was all about waiting for US inflation data and the ECB; the week ahead will be spent hoping for Federal Reserve guidance on US monetary policy – and EUR/USD is unlikely to move far eithe…
By ezaposwa ngomhla iiyure 8 eyadlulayo
By ezaposwa ngomhla iiyure 9 eyadlulayo
UNexo ukholelwa ukuba ekuhambeni kwexesha, umgaqo uza kunceda i-crypto ngaphezulu kokulimaza.
By ezaposwa ngomhla iiyure 11 eyadlulayo
Ukudibanisa ukuzuza okuthobekileyo sisicwangciso esiphambili sabathengisi be-crypto abaphumeleleyo- i-LUNA akufuneki iye enyangeni ukunceda i-rocket yenzuzo.
Digital asset management firm Arrington Capital has announced the launch of a $100 million fund, set to invest in initiatives built on the Algorand blockchain. It launched the fund, entitled the Arrington Algo Growth Fund (AAGF), in hopes of encouraging further growth in Algorand’s ecosystem. According to a release, the blockchain has already seen “significant … Continued
The post Arrington Capital Invests Millions into Expanding Algorand’s Ecosystem appeared first on BeInCrypto.
Umphathi we-S! NG ekuphuculeni amaLungelo okuPhathwa kweempahla ngeNFTs
By ezaposwa ngomhla iiyure 12 eyadlulayo
Ukunyuka kwesitokhwe se-GME kunye ne-AMC kunokuchaphazela iimali zemali ze-crypto, i-BTC ayininzi kangako?
By ezaposwa ngomhla iiyure 13 eyadlulayo
Ixabiso le- $ 288K BTC 'lisadlala' itsho iPlanB njengeentshatsheli zaseBloomberg iBitcoin enesiqingatha
Isitrato sikaRhulumente sanda siye kwi-Crypto kunye neTokenization
State Street’s new division will allow the company to expand into cryptocurrencies, tokenization, CBDCs, and blockchain.
By ezaposwa ngomhla iiyure 14 eyadlulayo
Ukuxelwa kwangaphambili kwexabiso leBitcoin usebenzisa iimodeli zobungakanani, Icandelo 4
1 2 ... 1,015 Okulandelayo
umthetho wabucala / Ngebhongo zeSITA WordPress Umxholo: Romero.